Daniel – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Daniel
1:1 Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Joiakima, mpanjakan'ny Joda,, Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona dia tonga tany Jerosalema ka nanao fahirano azy.
1:2 Ary ny Tompo nahafaka eo an-tànany Joiakima, mpanjakan'ny Joda, sy ny ampahany amin 'ny fanaky ny tranon'Andriamanitra,. Ary nitondra azy ho any amin'ny tany Sinara, ho any an-tranon'ny andriamaniny, Ary nitondra ny vilany ho any amin'ny efi-trano harena ny andriamaniny.
1:3 Ary ny mpanjaka niteny Ashpenaz, ny lehiben'ny tandapa, lehiben'ny tandapany, hitondra eo sasany amin'ny Zanak'Isiraely, ary ny sasany tamin'ny taranaky ny mpanjaka sy ny sovereigns:
1:4 tovolahy, izay dia tsy nisy tsiny, mendri-kaja ny amin'ny miseho ihany, ary tanteraka ny fahendrena rehetra, malina amin'ny fahalalana, ary manam-pahaizana, ary Iza no hahajanona, ao amin'ny lapan'ny mpanjaka, ka mba hampianatra azy ny taratasy sy ny tenin'ny Kaldeana.
1:5 Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro vatsy ho an'ny, avy ny sakafo sy avy tamin'ny divay izay tenany nisotro, amin'izay mba, taorian'ny mivelona nandritra ny telo taona, izy ireo dia hitsangana eo imason'ny mpanjaka.
1:6 Ankehitriny, eo ny an'ny taranak'i Joda,, nisy Daniel, Hanania, Misaela, ary Azaria.
1:7 Ary ny lehiben'ny tandapa anarana voatendry ho azy ireo: an'i Daniel, Beltesazara; an'i Hanania, Sadraka; an'i Misaela, Mesaka; ary Azaria, Abednego.
1:8 Fa Daniel Tapa-kevitra tao am-pony fa tsy ho voaloto amin'ny sakafo ny mpanjaka, na tamin'ny divay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehiben'ny tandapa izy mba tsy ho voaloto.
1:9 Ary Andriamanitra dia nanome Daniela fahasoavana sy famindram-po eo imason'i ny mpitarika ny tandapa.
1:10 Sy ny mpitarika ny tandapa nanao tamin'i Daniela, "Matahotra ny mpanjaka tompoko, izay efa voatendry sakafo sy zava-pisotro ho anareo, izay, raha tokony mahita fa ny tarehy dia leaner noho ny an'ny tanora hafa mitovy taona aminao, ianao dia manameloka ny lohako ho any amin'ny mpanjaka. "
1:11 Dia hoy Daniela Malasar, izay ny mpitarika ny tandapa nanendry an'i Daniela, Hanania, Misaela, ary Azaria,
1:12 "Miangavy anao aho mba hitsapana antsika, mpanomponao, nandritra ny folo andro, ary aoka fakany homena antsika mba hihinana sy rano hosotroinay,
1:13 ary avy eo dia hitandrina ny atrehinay, ary ny tavany ny ankizy izay mihinana ny mpanjaka sakafo, ary avy eo dia ataovy amin'ny mpanomponao araka izay hitanao. "
1:14 Ary rehefa nandre izany teny izany, dia nizaha ny toetra azy nandritra ny folo andro.
1:15 Fa, rehefa afaka folo andro, ny tarehiny niseho tsara kokoa sy fatter noho ny ankizy rehetra izay efa nihinana avy tamin'ny mpanjaka sakafo.
1:16 Taorian'izay, Malasar nobaboiny ny anjara sy ny divay ho an'ny fisotro, ka dia nomeny azy fakany.
1:17 Na izany aza, ireo ankizy, Dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy fampianarana amin'ny isan-boky, ary ny fahendrena, fa Daniel, koa ny fahalalana ny fahitana sy ny nofy rehetra.
1:18 Ary rehefa vita ny andro, araka izay efa nilaza ny mpanjaka fa izy ireo dia ho entina ao amin'ny, ny lehiben'ny tandapa nitondra azy eo anoloan'ny imason'i Nebokadnezara.
1:19 Ary, raha ny mpanjaka niresaka taminy, dia tsy mbola nahita na dia lehibe amin'izao tontolo izao ho toy Daniel, Hanania, Misaela, ary Azaria; ary toy izany koa dia nijanona teo an-imason'ny mpanjaka.
1:20 Ary ny amin'ny foto-kevitra rehetra ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, mikasika izay ny mpanjaka naka hevitra aminy, dia nahita azy ireo mba ho folo heny noho ny mpahita rehetra sy ny mpanandro mitambatra, tao an-manontolo fanjakany.
1:21 Ary izany Daniela nijanona, na dia hatramin'ny taona voalohany nanjakan'i Kyrosy mpanjaka.
2:1 Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebokadnezara, Nebokadnezara nahita nofy, ary raiki-tahotra ny fanahiny, ary ny nofy nandositra azy.
2:2 Kanefa nandidy ny mpanjaka fa ny mpahita, ary ny mpanandro, sy ny mpanana ody, ary ny Kaldeana tafangona mba hanambara any amin'ny mpanjaka ny nofiny. Rehefa tonga, dia nijanona teo anoloan'ny mpanjaka.
2:3 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Nahita nofy, ary, ho sahiran-tsaina ao an-tsaina, Tsy fantatro ny zavatra hitako. "
2:4 Ary ny Kaldeana namaly ny mpanjaka teo amin'ny syriàka, "Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay. Lazao ny nofy ny mpanomponao, ka dia hanambara ny heviny. "
2:5 Dia namaly, ny mpanjaka nanao tamin'ireny Kaldeana ireny, "Ny fahatsiarovana efa nisoroka niala avy amiko. Raha tsy maneho ny nofy ho ahy, sy ny Dikany, dia hatao maty, ary ny trano dia ho nalain'ny fanjakana.
2:6 Fa raha manazava ny nofy sy ny heviny, dia hahazo valisoa avy amiko, ary ny fanomezam-pahasoavana, ary voninahitra be. Noho izany, manambara amiko ny nofy sy ny heviny. "
2:7 Dia namaly indray ireo ka nanao hoe:, "Aoka ny mpanjaka hilaza ny nofy tamin'ny mpanompony, ka dia hanambara ny heviny. "
2:8 Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe:, "Azoko antoka fa ianao stalling ny fotoana, satria fantatrareo fa ny fahatsiarovana efa nisoroka niala avy amiko.
2:9 Noho izany, raha tsy manambara amiko ny nofy, iray ihany no fanatsoahan-kevitra ny ho tonga momba anao, fa ny hevitry ny nofy dia toy izany koa diso, ary feno fitaka feno, ka hiteny eo anatrehako mandra-pahatongan'ny fotoana mandalo. Ary noho izany, ambarao ahy ny nofy, ary Izaho koa mahafantatra fa ny hevitry ny nofy izay milaza amiko dia marina toy izany koa. "
2:10 Ary ny Kaldeana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka, ka hoy izy:, "Tsy misy olona eto an-tany izay afaka hanatanteraka ny teninao, Ry mpanjaka ô. Fa tsy manana mpanjaka, na dia izay lehibe sy mahery, nangataka valiny toy izany avy amin'ny mpahita rehetra dia nasain'i, ary ny mpanandro, sy ny kaldeanina.
2:11 Fa ny valiny fa mitady, Ry mpanjaka ô, Tena sarotra. Ary tsy mety hisy olona ho hita iza no manambara izany eo imason'ny mpanjaka, afa-tsy ireo andriamanitra, izay resaka tsy amin'ny lehilahy. "
2:12 Ary rehefa nandre izany, ny mpanjaka nandidy an'i, noho ny fahatezerana sy ny fahavinirana be, fa ny olon-kendrin'i Babylona dia ho ringana.
2:13 Ary rehefa navoaka ny didy efa nivoaka, ny olon-kendry dia novonoina ho faty; ary Daniela sy ny namany dia nitady, ho ringana.
2:14 Dia nanontany Daniel, momba ny lalàna sy ny didim-pitsarana, ny Arioka, ny jeneraly ny tafiky ny mpanjaka, izay efa nivoaka mba hamono ny olon-kendrin'i Babylona.
2:15 Dia nanontany azy Jesosy, izay efa nandray ny baiko ny mpanjaka, Nahoana lozabe toy izany didim-pitsarana efa nivoaka avy ny tavan'ny mpanjaka. Ary noho izany, rehefa nanambara Arioka tamin'i Daniela ny raharaha,
2:16 Niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome azy izy fa fotoana hanambara ny vahaolana ho any amin'ny mpanjaka.
2:17 Ary dia niditra tao an-tranony, ary nanazava ny asa Hanania, ary Misaela, ary Azaria, ny namany,
2:18 mba hitady famindram-po izy ireo eo anatrehan'ny Andriamanitry ny any an-danitra, momba izany zava-miafina, ary mba Daniela sy ny namany mba tsy ho very miaraka amin'ny hafa olon-kendrin'i Babylona.
2:19 Ary ny zava-miafina nisy nambara tamin'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina. Ary Daniela nisaotra an'Andriamanitry ny lanitra,
2:20 ary niteny mafy, hoy izy:, "Enga anie ny anaran 'ny Tompo ho voatahy amin'ny taranaka ankehitriny sy ho mandrakizay; fa Azy ny fahendrena sy ny herimpo dia ny.
2:21 Ary manova ny andro sy ny taona. Manaisotra fanjakana ary mametraka azy ireo. Izy no manome fahendrena ho an 'ireo izay hendry sy fampianarana fahaiza-manao ho an'ireo izay mahalala.
2:22 Izy mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, ary fantany izay efa naorina ao amin'ny maizina. Ary ny mazava dia ao aminy.
2:23 Ho anao, Andriamanitry ny razantsika, I miaiky, ary ianao, I hidera. Fa nomenao fahendrena sy herimpo ho ahy, ary ankehitriny dia efa naseho ahy izay nanontany ny aminareo izahay, ho anao ary naharihariko ny mpanjaka ho anay ny eritreriny. "
2:24 Rehefa afaka izany,, Daniela dia niditra nankao amin'i Arioka in, izay notendren'ny mpanjaka handringana ny olon-kendrin'i Babylona, ary niteny taminy toy izany, "Aza mandringana ny olon-kendrin'i Babylona. Ento ho eo anatrehan'ny mpanjaka, ary Izaho no manazava ny vahaolana ho any amin'ny mpanjaka. "
2:25 Dia nentiny Arioka faingana ho any amin'ny mpanjaka Daniel, ka hoy izy taminy:, "Nahita lehilahy anankiray, zanaky ny transmigration Joda, iza no hanambara ny vahaolana ho any amin'ny mpanjaka. "
2:26 Ny mpanjaka namaly ka nilaza tamin'i Daniela, atao hoe Beltesazara, "Tokoa ve ianao mihevitra fa afaka manambara amiko ny nofy izay hitako sy ny heviny?"
2:27 ary Daniel, miatrika ny mpanjaka, namaly ka nanao hoe:, "Ny zava-miafina ny mpanjaka fa mitady, ny olon-kendry, ny mpahita, ary ny mpanandro dia tsy afaka hanambara ho any amin'ny mpanjaka.
2:28 Kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina, izay nanambara ho anao, Nebokadnezara mpanjaka, ny zavatra hitranga any am-parany fotoana. Ny nofy sy ny fahitan'ny lohanao teo ny fandrianao, dia toy izany.
2:29 Ianao, Ry mpanjaka ô, nanomboka mieritreritra, raha mbola ao amin'ny bodofotsy, momba ny zavatra ho avy rahatrizay. Ary izay mampiseho zava-miafina dia nampiseho anao ny zavatra hitranga.
2:30 Ho ahy, toy izany koa, zava-miafina io dia nambara, tsy araka ny fahendrena izay ato amiko hafa mihoatra noho ny amin'ny zavamananaina, fa mba ny hevitry ny nofy, mba haseho tamin'ny mpanjaka, ary mba ho fantatrareo ny hevitry ny ao an-tsainao.
2:31 Ianao, Ry mpanjaka ô, tsofa, ary indro, zavatra toy ny sarivongana lehibe. io sarivongana, izay sady lehibe no avo, nijoro avo noho ianao, ary nandinika ny fomba mahatsiravina izany.
2:32 Ny lohan'i ity dia ny sarivongan'i-bolamena tsara indrindra, fa ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ary koa tamin'ny, ny kibony sy ny feny dia nataony varahina;
2:33 fa ny shins vy, ny vola sasany vidiny-tongotra, ny vy ary ny iray hafa dia ny tapany tanimanga.
2:34 Ary toy izany koa ianareo mandra-nijery ny vato tapaka nefa tsy nendahan avy amin'ny tendrombohitra, Ary namely ilay sary teo amin'ny tongony, izay vy sy tanimanga, ka novakivakiny teo.
2:35 Ary ny vy, ny tanimanga, ny varahina, ny vola, ary ny volamena dia niara-torotoro fo, ary nihena tahaka ny lavenom-tokotany fahavaratra, ka dia haingana mba noravana ny rivotra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo; fa ny vato izay namely ny sarivongana dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra.
2:36 Izany no nofy; izahay koa milaza ny heviny eo anatrehanao, Ry mpanjaka ô.
2:37 Ianao no ho mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary Andriamanitry ny any an-danitra dia nanome anao ny fanjakana, sy ny herimpo, sy ny hery, sy ny voninahitra,
2:38 sy ny toerana rehetra izay ny zanak'olombelona sy ny bibi-monina. Efa toy izany koa nomena ny biby manidina eny amin'ny rivotra eo an-tananareo, ary efa nametraka ny zavatra rehetra eo ambany ny fanjakana. Noho izany, ianao no loha volamena.
2:39 Ary rehefa afaka ianao, fanjakana hafa hitsangana, latsaka noho ianareo, volafotsy, ary hisy fanjakana fahatelo koa varahina, izay mpanapaka ny izao tontolo izao.
2:40 Ary ny fanjakana fahefatra dia ho tahaka ny vy. Fotsiny toy ny vy manorotoro sy mandresy ny zava-drehetra, dia toy izany no manorotoro sy hanorotoro ireo rehetra ireo.
2:41 Koa, satria hitanao ny tongotra sy ny rantsan-tongotra mba ho anisan'ny mpanefy vilany ny tanimanga ary ny tapany vy, ny fanjakana dia hozaraina, fa mbola, avy amin'ny taratasy kely ny vy dia handray ny fiandohany, satria hitanao ny vy miharo tanimanga ny tanimanga avy.
2:42 Ary toy ny rantsan-tongotra, ny ampahany vy ary ny tapany tanimanga, ampahany amin'ny fanjakana dia ho mafy fa ny sasany kosa dia ho torotoro.
2:43 Na izany aza, satria nahita vy miharo tanimanga eto an-tany, izy ireo dia mitambatra ho tokoa fa tsy ilay taranaky ny olona, nefa tsy manaraka ny iray hafa, toy ny vy tsy azo afangaro amin'ny tanimanga.
2:44 Fa amin'ny andro 'ireo fanjakana, ny Andriamanitry ny lanitra dia aingam-panahy ny fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary ny fanjakany tsy ho natolotra ho amin'ny firenen-kafa, Ary hanorotoro sy handevona ireo fanjakana rehetra ireo, ary izany fanjakana kosa haharitra any amin'ny mandrakizay.
2:45 Araka izao hitanareo, satria ny vato dia triatra nizara niala tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy nendahan, ary nanorotoro ny tanimanga, ary ny vy, ary ny varahina, ary ny volafotsy, ary ny volamena, Andriamanitra lehibe nampiseho ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy any aoriany izany. Ary ny nofy marina, sy ny heviny mahatoky. "
2:46 Ary Nebokadnezara mpanjaka niankohoka sy tsaohina Daniel, ary nandidy mba hanatitra sorona ho azy ireo niharam-boina sy ny ditin-kazo manitra.
2:47 Ary toy izany ny mpanjaka niteny tamin'i Daniela ka nanao hoe:, "Marina tokoa fa, fa Andriamanitrareo dia Andriamanitry ny andriamanitra, sy Tompon'ny mpanjaka, ary koa Mpampiharihary zava-miafina, satria afaka hampiseho izany zava-miafina. "
2:48 Ary nitsangana ny mpanjaka Daniela ho avo laharana ka nanome azy zavatra maro sady lehibe, ary izy nanendry azy ho mpanapaka rehetra isan-tokony eran'ny tany Babylona sy ho lehiben'ny ireo governora dia ambonin'ny hafa rehetra olon-kendrin'i Babylona.
2:49 Na izany aza, Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka mba hanendry Sadraka, Mesaka, ary Abednego amin'ny asan'ny Babylona sy ny fehiny. Fa i Daniela dia teo anilan'ny mpanjaka ny varavarana.
3:1 Nebokadnezara Mpanjaka nanao sarivongan'i volamena, enim-polo hakiho ny hahavony, ary enina hakiho ny sakany, ary dia natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora ao amin'ny faritanin'i Babylona.
3:2 Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny governora, mpanapaka sy mpitsara, jeneraly sy ny sovereigns sy ny mpifehy, sy ny mpitarika ny faritra, ho avy ireo ho amin'ny fitokanana ny sarivongana, Nebokadnezara mpanjaka izay efa natsangana.
3:3 Ary ny governora, mpanapaka sy mpitsara, jeneraly sy ny manan-kaja sy ny sovereigns, izay voatendry amin'ny fitondrana, sy ny mpitarika ny faritra dia hiangona mba nivory ho amin'ny fitokanana ny sarivongana, Nebokadnezara mpanjaka izay efa natsangana. Koa araka izany ny nitsangana teo anatrehan'ny sarivongana Nebokadnezara mpanjaka izay efa natsangan'i.
3:4 Ary ho mpitory nanambara mafy, "Izao no lazaina aminareo hoe:, ho ry firenena, foko, ary ny fiteny,
3:5 fa amin'ny ora rehefa handre ny feon'ny anjomara sy ny sodina sy ny valiha, ny lokanga sy ny valiha, ary ny symphonie sy ny mozika isan-karazany, tsy maintsy miankohofa, ka fatratra ny sarivongana volamena, Nebokadnezara mpanjaka izay efa natsangan'i.
3:6 Fa raha misy tsy hiankohoka eo anatrehany, ary mankafy, amin'izany ora izany dia hatsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. "
3:7 Rehefa afaka izany,, noho izany, raha vao ren'ny vahoaka rehetra ny feon'ny anjomara, ny sodina sy ny valiha, ny lokanga sy ny valiha, ary ny symphonie sy ny mozika isan-karazany, ny firenena rehetra, foko, ary ny fiteny dia niankohoka sy nitsaoka ny sariolona volamena, Nebokadnezara mpanjaka izay efa natsangan'i.
3:8 Sy ny sisa, momba izany fotoana izany, pahefana sasany Kaldeana ka niampanga ny Jiosy,
3:9 ary hoy izy ireo tamin'i Nebokadnezara mpanjaka, "Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay.
3:10 Ianao, Ry mpanjaka ô, Efa nanorina ny didim-panjakana, ka ny olona rehetra izay mba tsy hihaino ny feon'ny anjomara, ny sodina sy ny valiha, ny lokanga sy ny valiha, ary ny symphonie sy ny mozika isan-karazany, dia niankohoka, ary fatratra ny sarivongana volamena.
3:11 Fa raha misy olona tsy miankohoka sy mankafy, izy hatsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo.
3:12 Kanefa misy pahefana Jiosy, izay nataonao ho tonian'ny asa ao amin'ny faritra Babylona, Sadraka, Mesaka, ary Abednego. ireo lehilahy ireo, Ry mpanjaka ô, efa tsinontsinona ny didim-panjakana. Tsy manompo ny andriamanitrao, ary tsy fatratra ny sarivongana volamena izay efa natsangana. "
3:13 Ary Nebokadnezara, ny fahavinirana ary amin'ny fahatezerana, nandidy fa Sadraka, Mesaka, ary Abednego dia tokony ho entina, ary noho izany, hatrany, dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka.
3:14 Ary Nebokadnezara mpanjaka tamin'izy ireo ka nanao hoe:, "Moa ve marina, Sadraka, Mesaka, ary Abednego, fa tsy mivavaka ny andriamanitro, na mankafy ny sarivongana volamena, izay natsangako?
3:15 Noho izany, raha vonona izao, isaky ny mandre ny feon'ny anjomara, sodina, valiha, lokanga sy valiha, ary ny symphonie sy ny mozika isan-karazany, miondrika ny tenanareo, ary fatratra ny sarivongana izay efa nataoko. Fa raha tsy tsaohintsika, amin'izany ora izany dia ho hariana any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra no hanafaka anao amin'ny tanako?"
3:16 Sadraka, Mesaka, ary Abednego ka nanao tamin'i Nebokadnezara mpanjaka, "Tsy mety ho antsika hankatò anareo ny amin'izany zavatra izany.
3:17 Fa indro, ny Andriamanitsika, Izay mivavaka, dia afaka ny hamonjy antsika amin'ny lafaoro ny afo mirehitra, ary mba hanafaka antsika amin'ny tananao, Ry mpanjaka ô.
3:18 Fa na raha tsy, aoka ho fantatrareo, Ry mpanjaka ô, fa isika dia tsy manompo ny andriamanitrao, na mankafy ny sarivongana volamena, izay efa natsangana. "
3:19 Ary Nebokadnezara dia feno fahatezerana, ary ny tarehin'ny niova ny tarehiny tamin'i Sadraka dia, Mesaka, ary Abednego, ary nandidy fa ny lafaoro tokony ho tezitra ny fito heny noho ny mahazatra afo.
3:20 Ary nomeny baiko ilay lehilahy matanjaka indrindra, ny miaramilany tamin'ny namatotra ny tongotry ny Sadraka, Mesaka, ary Abednego, sy nanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo.
3:21 Ary niaraka tamin'izay dia nafatotra ireo lehilahy ireo, ary miaraka amin'ny miakanjo ny akanjo lavany, ary ny satroka, ary ny kiraro, ary ny fitafiany, dia natsipy tany amin'ny afovoan'ny amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo mirehitra.
3:22 Fa ny didin'ny mpanjaka Tena maika fa ny lafaoro dia tezitra loatra. Vokatr'izany, ireo olona izay efa nandatsaka Sadraka, Mesaka, ary Abednego, no maty noho ny lelafo.
3:23 Fa izy telo lahy ireo, izany hoe, Sadraka, Mesaka, ary Abednego, rehefa voafatotra, dia niankohoka teo afovoan'ny ny lafaoro ny afo mirehitra.
3:24 Dia nandeha tao amin'ny afovoan'ny lelafo, nidera an'Andriamanitra sy ny fitahiana ny Tompo.
3:25 Ary Azaria, raha mitsangana, Nivavaka toy izany, ary eo am-piandohan'ny ny vava eo amin'ny afo, hoy izy::
3:26 "Sambatra ianao, Tompo O, ny Andriamanitry ny razantsika, ary ny anaranao be voninahitra mendrika ny dera amam ho an'ny sokajin-taona rehetra.
3:27 Fa Hianao no marina tamin'izay rehetra ny zavatra izay efa vita ho antsika, ary ny asanao marina, ary ny lalanao marina, ary ny fitsarany marina.
3:28 Fa efa nataonao mitovy ny fitsarana marina ny zavatra rehetra izay efa nanjo anay sy ny Jerosalema, ny tanàna masina ny razantsika. Fa amin'ny fahamarinana sy ny fitsarana, ianao hampidiniko izy rehetra izany noho ny fahotanay.
3:29 Fa efa nanota izahay, ary nanao meloka amin'ny nialany avy aminao, ka efa tafintohina noho ny zava-drehetra.
3:30 Ary isika tsy nihaino ny didinao, na dia efa nahita na nanao araka izay efa nandidian'i anay, mantsy izy, mba hahita soa aminay.
3:31 Noho izany, izay rehetra efa nanjo anay, ary izay rehetra efa nataony ho antsika, nataonao amin'ny tena fitsarana.
3:32 Ary amin'izany dia efa namonjy anay eo an-tanan 'ny fahavalontsika: mpamadika, tsy ara-drariny sy tena ratsy fanahy, ary ny mpanjaka, tsy ara-drariny sy tena ratsy fanahy, kokoa izany noho ny hafa rehetra eto an-tany.
3:33 Ary ankehitriny isika dia tsy afaka nanokatra ny vavany. Efa tonga henatra sy fahafaham-baraka ny iray mpanomponao sy izay mivavaka anao.
3:34 Aza manolotra antsika eo mandrakizay, mangataka aminareo izahay, noho ny anaranao, ary tsy hanafoana ny fifanekena.
3:35 Ary aza tsy mampitony ny famindram-pony amintsika, noho ny amin'i Abrahama, malalanao, ary Isaka, mpanomponao, ary ny Isiraely, ny Iray Masinao.
3:36 Efa niteny tamin'izy ireo, nampanantena fa ho maro ny taranany toy ny kintana eny amin'ny lanitra na tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina.
3:37 Fa izahay, Tompo O, dia nihena mihoatra noho ny firenena hafa rehetra, ary dia nitondra ambany amin'ny tany rehetra, androany, noho ny fahotanay.
3:38 Ary tsy misy, amin'izao fotoana izao, ny mpitarika, na ny mpanapaka, na ny mpaminany, na Famonoana Tambabe, na sorona, na ny fanatitra hohanina, na ditin-kazo manitra, na ny toerana ny voaloham-bokatry, eo imasonao,
3:39 dia mba ho afaka hahita ny famindram-po. Na dia izany aza, amin'ny fanahy manenina sy ny manetry tena, dia aoka isika ho ekena.
3:40 Toy ny sorona dorana dia vantotr'ombilahy sy ny ondrilahy, Sy tahaka ny zanak'ondry matavy an'arivony, aoka ny sorona ho eo imasonao androany, mba hahafaly anao. Fa tsy misy henatra ho an'izay matoky anao.
3:41 Ary ankehitriny isika dia manaraka anao amin'ny fo manontolo, ary hatahotra anao, ary mitady ny tavanao.
3:42 Aza antsika ho afa-baraka, fa hiatrika anay amin'ny fifanarahana amin'ny famindrampo sy araka ny haben'ny famindram-ponao.
3:43 Ary hamonjena antsika ny fahagagana, ary hanome voninahitra ny anaranao, Tompo O.
3:44 Ary aoka ho menatra izay rehetra izay mitondra mankany amin'ny ratsy ny mpanomponao. Enga anie izy ireo ho menatra rehetra ny hery sy ny mety ho torotoro ny heriny.
3:45 Ary enga anie izy ireo mahalala fa ny Tompo ianao, ny hany Andriamanitra, sy be voninahitra mihoatra noho ny an'izao tontolo izao. "
3:46 Ary tsy nitsahatra, ireo mpanompony ny mpanjaka izay-pandroakany azy amin'ny, mba nafanaina ny lafaoro diloilo, sy rongony, sy ny dity, ary borosy.
3:47 Ary ny lelafo mirohotra nivoaka ambonin'ny fatana fandrendrehana ho an'ny sivy amby efa-polo hakiho.
3:48 Ary nipoaka ny afo ka nandoro ireo ny Kaldeana ao anatin'ny takatry akaikin'ny lafaoro.
3:49 Fa nisy anjelin'ny Tompo nidina tamin'i Azaria sy ny namany ho any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra; ary natontany ny lelafo avy tao amin'ny lafaoro lehibe.
3:50 Ary nanao ny afovoan'ny amin'ny fandoroana lehibe mirehitra toy ny fitsofana ny rivotra mando, ary ny afo tsy mamely azy, ary tsy hampahory azy, na manelingelina azy akory.
3:51 Ary ireo telo, toy ny hoe indray miredona, Nidera sy omem-boninahitra ka nidera an'Andriamanitra, ao amin'ny fandoroana lehibe mirehitra, nanao hoe::
3:52 "Sambatra ianao, Tompo, Andriamanitry ny razantsika: mendri-piderana, sy be voninahitra, ary pankalazana ambony indrindra mandrakizay. Ary sambatra ny anarana masin 'ny voninahitrao: mendri-piderana, amam-pankalazana ambony rehetra, ho an'ny sokajin-taona rehetra.
3:53 Isaorana hianao ao amin'ny tempoly masina ny voninahitrao: ambonin'ny zava-drehetra, ary mendri-piderana-pankalazana ambony indrindra mandrakizay.
3:54 Isaorana hianao, ao amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakanao: ambonin'ny zava-drehetra, ary mendri-piderana-pankalazana ambony indrindra mandrakizay.
3:55 Sambatra ianareo mahita lavaka tsy hita noanoa sy mipetraka eo ambonin'ny kerobima: mendrika ny dera amam-pankalazana ambony indrindra mandrakizay.
3:56 Isaorana hianao, eo amin'ny habakabaky ny lanitra: mendrika ny dera amam-boninahitra mandrakizay.
3:57 Rehetra asan'i Jehovah, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:58 Ny anjely ny Tompo, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:59 an-danitra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:60 Ny rano ambonin'ny lanitra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:61 Hery rehetra 'ny Tompo, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:62 Masoandro amam-bolana, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:63 Kintana eny amin'ny lanitra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:64 Orana sy ny ando rehetra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:65 Rehetra fofonain'Andriamanitra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:66 Ny afo sy ny etona, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:67 Hatsiaka sy ny hafanana, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:68 Ando sy ny fanala, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:69 Erka kely sy ny ririnina, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:70 Ranomandry sy ny oram-panala, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:71 Alina sy ny andro, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:72 Mazava sy ny maizina, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:73 Tselatra sy rahona, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:74 Enga anie ny tany Misaora an'i Jehovah: sy ny fiderana ary hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:75 Tendrombohitra sy ny havoana, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:76 Ny zavatra rehetra izay maniry eo amin'ny tany, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:77 loharano, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:78 Ranomasina sy ny renirano, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:79 Trozona ary ny zavatra rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:80 Ny zavatra rehetra izay manidina any an-danitra, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:81 Ny biby fiompy rehetra sy ny biby, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:82 Zanaky ny lehilahy, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:83 Enga anie ny Tompo hitahy ny Isiraely: sy ny fiderana ary hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:84 Mpisoron'i Jehovah, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:85 Mpanompon'ny Tompo, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:86 Fanahy sy ny fanahin'ny marina, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:87 Ireo izay masina sy manetry tena am-po, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay.
3:88 Hanania, Azaria, Misaela, Misaora an'i Jehovah: hidera sy hanandratra azy ho ambony noho izay rehetra mandrakizay. Fa namonjy anay tamin'ny ambanin'ny, ka namonjy anay tamin'ny tanan'ny ny fahafatesana, ary nanafaka antsika avy teo amin'ny afo mirehitra, ka namonjy anay tsy ho eo amin'ny afo.
3:89 Miderà an'i Jehovah fa tsara Izy: fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
3:90 Ireo rehetra izay tia fivavahana, Misaora an'i Jehovah, Andriamanitry ny andriamanitra: hidera azy sy manaiky azy satria ny famindram-pony dia hatramin'ny taranaka fara mandimby. "
3:91 Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka dia, Ary haingana nitsangana ka nilaza tamin'ny manan-kaja: "Tsy izahay no tsy nahavoaka telo lahy Nofatorana eo afovoan'ny afo?"Famaliana ny mpanjaka, hoy izy ireo, "Marina, Ry mpanjaka ô. "
3:92 Ary izy namaly ka nanao hoe:, "Indro, Aho mahita efa-dahy unbound sy mandehandeha eo anaty afo, ary tsy misy ratsy ao aminy, ary ny fijery ilay fahefatra dia tahaka ny zanak'Andriamanitra. "
3:93 Ary Nebokadnezara nanatona ny fidirana amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo mirehitra, ka hoy Izy:, "Sadraka, Mesaka, ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra ilay Andriamanitra Fara Tampony, mivoaha ary ny fomba fiasa. "Ary avy hatrany Sadraka, Mesaka, ary Abednego nivoaka avy ao afovoan'ny afo,.
3:94 Ary raha ny governora, ary ireo governora, sy ny mpitsara, ary ny mahery ny mpanjaka efa nivory, Nihevitra izy ireo ireo lehilahy ireo, satria ny afo tsy nanan-kery hanohitra ny vatany, fa tsy ny volon-dohany efa may, ary ny pataloha tsy mbola vokany, ary ny fofon'ny ny afo tsy nandalo teo aminy.
3:95 Ary Nebokadnezara, Hipoaka avy, nanao hoe:, "Sambatra izay mba Andriamanitr'ireo, ny Andriamanitr'i Sadraka, Mesaka, ary Abednego, izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay nino Azy. Ary Nanova ny didim-pitsarana ny mpanjaka, ary nanolotra ny vatany, ka tsy hanompo na fatratra amin'izay andriamani-kafa afa-tsy Andriamaniny.
3:96 Noho izany, didim-panjakana ity no iorenan'ny ahy: fa ny fokom, firenena, ary ny fiteny, isaky ny efa niteny fitenenan-dratsy ny Andriamanitr'i Sadraka, Mesaka, ary Abednego, ho levona sy ny tranony, dia ho ringana. Fa tsy misy andriamani-kafa mahavonjy toy izany. "
3:97 Dia nasandratry ny mpanjaka Sadraka, Mesaka, ary Abednego tao amin'ny faritanin'i Babylona.
3:98 NEBOKADNEZARA, ny mpanjaka, ny firenena rehetra, firenena, ary ny fiteny, izay monina any izao tontolo izao, Fiadanana ho bebe kokoa aminareo.
3:99 Ny fara tampony Andriamanitra tanteraka famantarana sy fahagagana amiko. Noho izany, izay tiany Ahy hitory
3:100 ny famantarana, izay lehibe, ary ny fahagagana, izay mahery. Fa ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, sy ny heriny mitohy hatramin'ny taranaka fara-mandimby.
4:1 I, Nebokadnezara, dia afa-po ao an-tranoko sy miroborobo eo amin'ny lapa.
4:2 Nahita nofy izay nampahatahotra ahy, sy ny hevitro raha Teo am-pandriako, ary ny fahitan'ny lohako amin'ny tsaina ahy.
4:3 Ary noho izany dia nisy didy naorin'ny ahy, fa ny olon-kendrin'i Babylona tokony nampidirina teto anatrehako, ary toy izany no manambara amiko ny valin 'ny nofy.
4:4 Ary ny mpahita, ny mpanandro, ny Kaldeana, ary ny mpanandro niditra, ary nanazava momba ny nofy ny anatrehany, nefa tsy manambara ny valiny ho ahy.
4:5 Ary avy eo ny mpiara-miasa dia tonga teto anatrehako, Daniel, (no anarany hoe Beltesazara, araka ny anaran'ny andriamanitro,) Izay manana ny Fanahin 'ny andriamanitra masina ao anatin'ny tena ny tena, ary ny nofy dia nilaza mivantana taminy.
4:6 Beltesazara, mpitarika ny mpahita, satria fantatro fa manana ao aminao ny Fanahin 'ny andriamanitra masina, ary tsy misy zava-miafina izay tsy takatra ho anao, manazava ahy ny fahitana ny nofy, izay efa hitako, ary ny vahaolana ho azy ireo.
4:7 Izany no fahitana ny lohako teo am-pandriako. nijery aho, ary indro, hazo eo afovoan'ny tany, ary ny hahavony dia lehibe izaitsizy tokoa.
4:8 Ny hazo sady lehibe no mahery,, ary ny hahavony manakatra ny lanitra. Mety ho hita ny lalana rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany manontolo.
4:9 Ny raviny dia tsara tarehy, ary ny voany dia tena be, ary amin'ny maraina ny sakafo ho an'izao tontolo izao. ambaniny, biby sy ny biby nonina, ary ao amin'ny rantsany, ny voro-manidina dia voaaro, ary avy amin'izy io, ny nofo rehetra dia sakafo.
4:10 Dia nahita tamin'ny fahitana ny lohako eo amin'ny bodofotsy, ary indro, ny Mpandinika sy masina anankiray nidina avy tany an-danitra.
4:11 Dia nitaraina mafy, Ary izy no nilaza izany: "Hikapa ny hazo sy handrantsana ny rantsany; ahintsano ny raviny ka ampielezo ny vokatra; aoka handositra ny biby, izay ambaniny, ary ny voro avy amin'ny sampany.
4:12 Na dia izany aza, hiala amin'ny fototr'i ny fakany eto an-tany, ary aoka ho voafatotra amin'ny tarika ny vy sy ny varahina eo amin'ny zavamaniry, izay akaiky ny, ary aoka ho voakasiky ny andon'ny lanitra, ary aoka ny toerana ho amin'ny bibidia teo anivon 'ny zava-maniry amin'ny tany.
4:13 Aoka ny fony tsy miova tsy ho olombelona, ary aoka ny fon'ny bibidia homena azy, ary aoka fe-potoana fito holanina aminy.
4:14 Izany no didy avy amin'ny fitsarana ny mpiambina, ary ny fanapahan-kevitra sy ny fitoriana ny olona masina, mandra-velona ho fantany fa ny Avo Indrindra no Mpitondra eo amin'ny fanjakan'ny olona, ary Izy no hanome azy ho an'izay izay sitrapony,, dia hanendry lehilahy izay hitandrina ny ambany indrindra izany. "
4:15 I, Nebokadnezara mpanjaka, nahita izany nofy. Ary toy izany koa ianao, Beltesazara, haingana dia tsy maintsy hanazava amiko ny hevitry ny nofy, satria ny olon-kendry rehetra amin'ny fanjakako tsy afaka hanambara ny hevitry ny azy ho ahy. Fa ianareo no afaka noho ny Fanahin 'ny andriamanitra masina ao anatinao.
4:16 dia Daniel, atao hoe Beltesazara, Nanomboka nieritreritra mangina tao am-pony fa tokony ho ora iray, ary ny eritreriny naharaiki-tahotra azy. Fa ny mpanjaka namaly, nanao hoe:, "Beltesazara, aza avela ny nofy sy ny heviny hanelingelina anao. "Beltesazara namaly ka nanao hoe:, "Tompoko, ny nofy dia ho an 'ireo izay mankahala anareo, sy ny heviny dia mety ho ny fahavalonareo.
4:17 Ny hazo hitanao dia efa teo ambony sy mahery; Nahatratra ny haavony ny lanitra, ary mety ho hita eny tontolo izao.
4:18 Ary ny sampany dia tena tsara tarehy, ary ny voany dia be, ary tao nisy sakafo ho an'ny rehetra. ambaniny, nonina ny biby any an-tsaha, ary ao amin'ny rantsany, ny voro-manidina nitoetra.
4:19 Ny anao, Ry mpanjaka ô, izay efa be hoheverina, ary efa maniry mafy. Ary-pahamaronao ny herinao, Ary mahatratra nankany an-danitra, ary ny fitsipika dia hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra.
4:20 Nefa ny mpanjaka koa dia nahita Mpijery sy masina any an-danitra iray hidina avy ka hanao hoe:: 'Hikapa ny hazo, ary hanely azy; na izany aza, hiala amin'ny fototr'i ny fakany eto an-tany, ary aoka tsy hamatotra ary tamin'ny vy sy varahina, teo anivon 'ny manodidina zavamaniry, ary aoka ny famafazan'ny ny andon'ny lanitra, ary aoka ny sakafo ho amin'ny bibi-, mandra-pahatongan'ny fe-potoana fito holanina aminy. '
4:21 Izao no hevitry ny teny fitsarana Avo Indrindra, izay tonga tompoko, ny mpanjaka.
4:22 Dia handroaka anareo tsy ho amin'ny olona, ary ny fonenanao ho amin'ny biby fiompy sy ny bibidia, ka hihinana mololo tahaka ny omby, ary ho vonton'ny amin'ny andon'ny lanitra. Toy izany koa, vanim-potoana fito, dia handalo anareo, mandra fantatrareo fa ny Fara Tampony manjaka amin'ny fanjakan'ny olona, ary manome azy ho an'izay izay sitrapony,.
4:23 Fa, satria Izy nandidy fa ny foto-kazo ny fakany, izany hoe, ny hazo, Tokony havela aoriana, ny fanjakanao sisa no ho tavela ho anao, rehefa tonga saina ianao fa ny hery avy maha-Andriamanitra.
4:24 Noho io, Ry mpanjaka ô, aoka ny torohevitro hankasitrahana anareo. Ary avoty ny fahotanareo miaraka amin'ny fiantrana, ary ny helokareo amin'ny famindram-po manoloana ny mahantra. Angamba dia hamela ny heloka. "
4:25 Rehetra izany, dia tonga Nebokadnezara mpanjaka teo.
4:26 Rehefa tapitra ny roa ambin'ny folo volana, dia nandray ny mandeha amin'ny lapan'i Babylona.
4:27 Ary ny mpanjaka niteny mafy, nanao hoe:, "Tsy izao va no Babylona lehibe, izay nataoko, tahaka ny an-trano 'ny fanjakana, Tamin'ny herin'ny heriko sy amin'ny voninahitry ny ny fahatsarany?"
4:28 Ary raha mbola olona ny teny ao am-bavan'ny mpanjaka, nisy feo avy tany an-danitra ireo nitratrevatreva, "Ho anao, Ry Nebokadnezara mpanjaka, atao hoe:: 'Ny fanjakana dia: Hesorina aminareo,
4:29 ka namoaka anareo avy any amin'ny olona, ary ny fonenanao ho amin'ny biby fiompy sy ny bibidia. No hihinananao mololo toy ny omby, ary fe-potoana fito, dia handalo anareo, mandra fantatrareo fa ny Avo Indrindra mitondra any amin'ny fanjakan'ny olona, ary manome azy ho an'izay izay sitrapony. ' "
4:30 Tamin'izany ora izany, ny didim-pitsarana tanteraka eo Nebokadnezara, ary noroahina tsy ho eo ny olona, ary nihinana mololo tahaka ny omby, ary ny fatiny dia ianao.-ny andon'ny lanitra, mandra-nitombo ny volon-dohany toy ny volo ny voromahery, sy hoho toy ny an'ny vorona.
4:31 Noho izany, tamin'ny faran'ny izao andro izao, I, Nebokadnezara, manandratra ny masony ho amin'ny lanitra, ary ny saina naverina tamin'ny laoniny ho ahy. Ary nitso-drano ny Avo Indrindra, ary nataoko ka nankalaza Izay velona mandrakizay. Fa ny herin'ny dia hery mandrakizay, ary ny fanjakany dia amin'ny taranaka fara-mandimby.
4:32 Sy ny mponina rehetra amin'ny tany dia malaza tahaka ny tsinontsinona eo anatrehany. Fa miasa araka ny sitrapony, amin'ny mponina eo amin'ny tany toy ny masina mponina any an-danitra. Ary tsy misy olona afaka manohitra ny tanany, na lazao aminy, "Nahoana ianao no nanao izany zavatra izany?"
4:33 Mandritra izany fotoana izany, saiko niverina tamiko, ary tonga tany amin'ny voninahitra sy ny voninahitry ny fanjakako. Ary ny fijery nomena ahy indray. Ary ny mpanapaka sy ny mpitsara nila ahy. Ary naverina tamin'ny laoniny ny fanjakako, ary na dia lehibe kokoa fiandrianana dia nanampy ahy.
4:34 koa izany no, Nebokadnezara, izao hidera, ary milofo, ary omeo voninahitra ny Mpanjakan'ny lanitra, satria ny asany rehetra sy ny fitsaran'ny fomba marina, ary izay mivoaka amin'ny fizahozahoana, izay tratry ny hitondra ambany.
5:1 Belsazara, ny mpanjaka, nanao fanasana lehibe ho arivo ny manan-kaja, ary ny iray tamin'izy ireo samy nisotro araka ny taona.
5:2 Ary noho izany, rehefa nisotro, dia nandidy fa ny fanaka volamena sy ny volafotsy dia tokony ho entina, izay Nebokadnezara, ny rainy, efa nentiny ho babo avy tao amin'ny tempoly, izay tany Jerosalema, ka ny mpanjaka, ary ny manan-kaja, sy ny vadiny, ary ny vaditsindrano, mba hisotroan'ny avy aminy.
5:3 Ary ny fanaka volamena sy volafotsy no aseho, izay efa nentina ho babo avy tao amin'ny tempoly, ary izay efa tany Jerosalema, ary ny mpanjaka, ary ny manan-kaja, vehivavy, ary ny vaditsindrano, nisotro azy.
5:4 Eny, nisotro divay, ary dia nidera ny andriamaniny volamena, ary ny volafotsy, varahina, vy, sy ny hazo sy vato.
5:5 Amin'izany ora izany, niseho rantsan-, toy ny an-tànan'ny olona, manoratra eny ambonin'ny amin'ny rindrina, ny fanaovan-jiro tandrifin'ny, tao an-tranon'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nahita ilay rantsan-tanana nanoratra izay.
5:6 Ary ny mpanjaka nivaloarika ny tarehin'ny, ary ny eritreriny tsaina azy, Ary very ny fifehezan-tena, ary ny lohaliny nandondona hanohitra iray hafa.
5:7 Ary ny mpanjaka niantso mafy ho azy ireo mba hampiditra ny mpisikidy, Kaldeana, ary ny mpanandro. Ary nanambara ny mpanjaka tamin'ny olon-kendrin'i Babylona, nanao hoe:, "Na zovy na zovy no mahavaky io soratra io sy hampahafantatra ahy ny heviny, dia hitafy volomparasy, ary manana rojo volamena ny vozony, ary ho fahatelo amin'ny fanjakako. "
5:8 Avy eo, in tonga rehetra ny olon-kendry 'ny mpanjaka, fa tsy afaka mamaky ny soratra, na manambara ny hevitry ny nofy amin'ny mpanjaka.
5:9 Noho izany, Belsazara mpanjaka dia tena sahiran-tsaina, ary ny tavany niova ny toetry, ary na dia ny manan-kaja no tsaina.
5:10 Fa ny vadin'ny mpanjaka,, noho ny zava-nitranga tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka, niditra tao amin'ny trano fanasana. Dia niteny avy, nanao hoe:, "Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay. Aoka tsy afangaro ny hevitrao anao, tsy tokony hovana ny tavanao.
5:11 Misy lehilahy ato amin'ny fanjakanao, Izay manana ny Fanahin 'ny andriamanitra masina tao am-pony, sy tamin'ny andron'i-drainao, fahalalana sy ny fahendrena hita tao aminy. Fa Nebokadnezara mpanjaka, ny rainao, fotoana taminy ireo mpitarika ny mpanandro, ny mpisikidy, Kaldeana, ary ny mpanandro, dia ny ray, Lazaiko aminareo, Ry mpanjaka ô.
5:12 Fa ny fanahy bebe kokoa, sy tsy mahatsinjo lavitra, sy fahiratan-tsaina, ary ny fandikana ny nofy, ary ny fampiharihariana ny zava-miafina, ary ny vahaolana amin'ny zava-tsarotra hita tao aminy, izany hoe, in Daniel, izay nantsoin'ny mpanjaka hoe Beltesazara nanome ny anarana. Ankehitriny, noho izany, aoka ho nampiantso Daniel, dia manazava ny heviny. "
5:13 Ary Daniela dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka niresaka taminy, nanao hoe:, "Ianao ve Daniel, ny zanaky ny fahababoana ny Joda, Izay ny mpanjaka raiko avy tany Jodia nitondra?
5:14 Efa reko ny aminao, fa manana ny fanahin'ireo andriamanitra, ary fahalalana bebe kokoa, ary koa ny fahalalana sy ny fahendrena, hita ao aminao.
5:15 Ary ankehitriny ny hendry mpanandro no niditra tao an-anatrehako, mba hamaky io soratra io sy hanambara amiko ny heviny. Ary izy ireo tsy afaka milaza amiko ny hevitry ny io soratra.
5:16 Koa, Efa reko ny momba anao fa dia mahalaza ny heviny ny zavatra mazava sy hamaha olana. Koa dia, Raha mahomby eo amin'ny famakiana ny soratra, ary amin'ny mampiseho ny heviny, dia hitafy volomparasy, dia ho hasiana rojo volamena ny vozonao, ary ianao no ho mpitarika fahatelo eto amin'ny fanjakako. "
5:17 Noho izany Daniela dia namaly amin'ny filazana mivantana ho any amin'ny mpanjaka, "Ny valisoa tokony ho ho anao, ary ny fanomezam-pahasoavana ao an-tranonao mba hanome ny hafa, fa izaho kosa dia hovakiako aminareo ny ny soratra, Ry mpanjaka ô, fa Izaho no hanambara aminao ny heviny.
5:18 Ry mpanjaka ô, Avo Indrindra Andriamanitra nanome an'i Nebokadnezara, ny rainao, fanjakana sy fahalehibiazana, voninahitra sy haja.
5:19 Ary noho ny fahalehibiazana izay nomeny azy, firenena rehetra, foko, ary ny fiteny dia nangovitra sy natahotra azy. Na zovy na zovy no naniry, namono; ary na zovy na zovy no naniry, fa nandringana; ary na zovy na zovy no naniry, dia nanandratra; ary na zovy na zovy no naniry, dia nampidininy.
5:20 Fa raha ny fony nihanatoky sy ny fanahiny dia nanamafy tao fireharehan'ny, dia nesorina avy tamin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany sy ny voninahiny nesorina.
5:21 Dia noroahina tao amin'ny zanak'olombelona, ary toy izany koa ny fony dia napetraka ny biby, ary ny fonenany tany amin'ny boriki, ary nihinana mololo tahaka ny omby, ary ny fatiny dia ianao.-ny andon'ny lanitra, mandra-takany fa ny Avo Indrindra mihazona-pahefana amin'ny fanjakan'ny olona, ary na iza na iza izy te, dia hifehy azy.
5:22 Toy izany koa, ianao, Belsazara zanany, dia tsy mba nampietry ny fonao, na dia nahalala izany rehetra izany.
5:23 Fa ianao efa nanangan-tena hanohitra ny Tompon'ny lanitra. Ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra dia efa natolotra eo anatrehanao. Ary ianao, ary ny manan-kaja, ary ny vadinareo, sy ny vaditsindranonao, nisotro divay avy aminy. Toy izany koa, ianao nankalaza ny andriamanitra volafotsy, ary ny volamena, ary varahina, vy, sy ny hazo sy vato, izay tsy mahita, na tsy hihaino, na mahatsapa, Nefa tsy nankalaza an'Andriamanitry izay mihazona ny fofonaina ary ny rehetra ataonao an-tànany.
5:24 Noho izany, Izy no naniraka ny rantsan-tanana izay efa voasoratra izany, izay efa misy izao soratra.
5:25 Fa izao no soratra izay efa namoaka didy: Volo, THECEL, Jiro.
5:26 Ary izao no hevitry ny teny. Volo: Andriamanitra efa voaisa ny fanjakanao, ary efa nahavita azy.
5:27 THECEL: ianao no nandanjana ny mizana ka nahita tsy ampy.
5:28 Jiro: ny fanjakanao efa mizarazara ary efa omena ho an'ny Mediana sy ny Persianina.
5:29 Avy eo, araka ny didin'ny mpanjaka, Daniel dia niakanjo volomparasy, ary rojo volamena napetraka manodidina ny vozony, ary nisy niantso azy fa izy dia mihazona ny fahefana toy ny fahatelo ao amin'ny fanjakana.
5:30 Izany tamin'iny alina iny, Belsazara, mpanjakan'ny Kaldeana dia novonoina.
5:31 Ary Dariosy Medianina nandimby ny fanjakana, amin'ny taona roa amby enim-polo taona.
6:1 Ary Dariosa Mediana, ary noho izany dia notendrena hitandrina ny fanjakana roa-polo amby zato governora, mba hapetraka eran'ny fanjakany rehetra.
6:2 Ary ny tonian'ny ireo, telo mpitarika, izay Daniel dia iray, ka dia ny governora ho tompon'andraikitra azy sy ny mpanjaka dia tsy misy olana.
6:3 Ary izany Daniela nahay mihoatra noho izay rehetra ny mpitarika sy ny governora, satria lehibe kokoa Fanahin 'Andriamanitra ao amin'i azy.
6:4 Koa, nihevitra ny mpanjaka mametraka azy ho lehibe amin'ny fanjakana manontolo; izay manohana ny mpitarika sy ny governora nitady hahita alahelo amin'ny sasany Daniel sy manohana ny mpanjaka. Ary tsy nahita raharaha, na ahiahy, satria tsy nivadika, ary tsy misy tsiny na ahiahy hita ao aminy.
6:5 Noho izany, ireo lehilahy ireo nanao hoe:, "Tsy nahita alahelo amin'ny sasany io Daniel, raha tsy izany dia manohitra ny lalàn 'Andriamaniny. "
6:6 Avy eo ny mpitarika sy ny governora voasambotra ny mpanjaka nitokana tao amin'ny mangingina, ary niteny taminy toy izany: "Dariosy Mpanjaka, velona mandrakizay.
6:7 Ny mpitarika ny fanjakanao, ny mpanapaka sy governora, ny loholona sy ny mpitsara, efa niara-nihevitra fa ny didy sy ny amperora no tokony ho namoaka didy, ka dia izay rehetra mangataka fangatahana, na amin'Andriamanitra na amin'olona telo-polo andro, afa-tsy ianareo, Ry mpanjaka ô, dia hatsipy ao an-davaky ny liona.
6:8 Ankehitriny, noho izany, Ry mpanjaka ô, hanamafy izany fitsarana sy manoratra ny didy, fa tsy mba zavatra napetraky ny Medianina sy ny Persianina dia tsy azo hovana, ary tsy hisy tsy hisy olona ho mahazo mandika azy io. "
6:9 Ary Dariosa mpanjaka dia nivoaka ny didim-panjakana nametraka ka nandamina azy.
6:10 Ary rehefa nianatra izany Daniel, izany hoe, fa ny lalàna no efa niorina, dia niditra tao an-tranony, ary, manokatra ny varavarankely tao amin'ny efitra ambony mankany Jerosalema, dia nandohalika intelo isan'andro, ka dia niankohoka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, araka izay efa zatra nanao teo aloha.
6:11 Noho izany, ireo lehilahy ireo, nanontany amim-pahavitrihana, nahita fa Daniela nivavaka sy mifona ho Andriamaniny.
6:12 Dia nanatona izy ka niteny tamin'ny mpanjaka momba ny didy. "Ry mpanjaka ô, no tsy lalàna fa ny olona rehetra izay manao fangatahana akory va ny olona ho andriamanitra na telo-polo andro, afa-tsy ny tenanao, Ry mpanjaka ô, dia hatsipy ao an-davaky ny liona?"Izay ny mpanjaka namaly, nanao hoe:, "Ny teny marina dia marina, ary araka ny didim-panjakana ny Mediana sy ny Persiana, ka tsy mety ny mandika azy io. "
6:13 Dia namaly izy ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka, "Daniel, ny zanaky ny fahababoana ny Joda, Tsy momba momba ny lalànao, na momba ny didim-panjakana izay no nanorenanao, fa intelo isan'andro izy mivavaka ny fitalahoana. "
6:14 Ary rehefa ren'ny mpanjaka izany teny izany, nalahelo indrindra izy, ary, amin'ny anaran'ny Daniel, Izay nanaovany fony mba hanafaka azy, ary niasa na dia mandra-ny masoandro mba hamonjy azy.
6:15 Fa ireo lehilahy ireo, mahalala ny mpanjaka, hoy izy taminy:, "Fantatrao, Ry mpanjaka ô, fa ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana dia rehetra didim-pitondrana izay efa napetraka ny mpanjaka dia tsy azo hovana. "
6:16 Ary ny mpanjaka nandidy an'i, ary nentina Daniela ka natsipy tao an-davaky ny liona. Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Daniela, "Ny Andriamanitra, izay manompo foana, Izy no hanafaka anao. "
6:17 Ary nisy vato nentina, ary dia napetraka noho ny vava-lavaka, izay mpanjaka voaisy tombo-kase tamin'ny peratra ny, ary ny kavim-ny mpanapaka, mba tsy hisy hanao zavatra an'i Daniel.
6:18 Ary ny mpanjaka lasa nankany an-tranony, ary dia lasa izy nankany am-pandriana tsy mihinana, sy ny sakafo tsy anoloany izy, koa, dia nandositra azy ny torimaso.
6:19 Ary ny mpanjaka, mahazo ny tenany tamin'ny voalohany hazavana, nandeha faingana ho any an-davaky ny liona.
6:20 Ary nony tonga teo amin'ny lavaka, dia niantso tamin'ny feo nitomany tamin'i Daniela ka niteny taminy. "Daniel, mpanompon'Andriamanitra velona Andriamanitra, Andriamanitrao, izay manompo foana, Mino ve ianao fa izy nahery mba hanafaka anao amin'ny liona?"
6:21 ary Daniel, namaly ny mpanjaka, nanao hoe:, "Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay.
6:22 Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny, Ary efa nakimpiny ny vavan'ny liona, ka tsy naninona ahy, satria eo anatrehany rariny Efa hita ao ahy, ary, na dia teo anatrehanao, Ry mpanjaka ô, Izaho efa nanao tsy manao izay mahatafintohina. "
6:23 Dia faly indrindra ny mpanjaka ho azy, ary nandidy fa Daniela dia tokony ho raisina avy tao an-davaka. Ary Daniela no nanalana azy an-davaka, ary tsy nisy ratra hita ao aminy, satria nino an'Andriamaniny.
6:24 Koa, ny didin'ny mpanjaka, ireo lehilahy ireo nitondra izay niampanga an'i Daniela, ary dia natsipy tany amin'ny davaky ny liona, izy ireo, ary ny zanany, ary ny vadiny, ka tsy tonga ny an-davaka ambany ny teo anoloan'ny liona nahazo azy sy ny torotoro ny taolany rehetra.
6:25 Tamin'izany Dariosa mpanjaka dia nanoratra ho firenena rehetra, foko, ary ny fiteny rehetra monina ao amin'ny tany. "Fiadanana ho bebe kokoa aminareo.
6:26 Izao no napetraky ny didim-panjakana izay, eran'ny fanjakany sy ny fanjakako, izy no hanomboka matahotra sy mangovitra ny Andriamanitr'i Daniela. Fa Izy no Andriamanitra velona sy mandrakizay mandrakizay, ary ny fanjakany tsy ho rava, ary ny heriny dia haharitra mandrakizay.
6:27 Izy no mpanafaka sy mpamonjy, manao famantarana sy zava-mahagaga any an-danitra sy eto an-tany, izay afaka Daniela ho afaka tamin'ny davaky ny liona. "
6:28 Taorian'izay, Daniela nahatratra ny alalan 'ny nanjakan'i Dariosy mandra-nanjakan'i Kyrosy, ny Persianina.
7:1 Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Belsazara, mpanjakan'i Babylona,, Daniel nahita nofy sy fahitana an-dohany eo am-pandriany. Ary, nanoratra ny nofy, fantany izany amin'ny fomba fohy, ary noho izany, mamintina azy io tamim-pahalainana, hoy izy::
7:2 Nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina, ary indro, ny rivotra efatry ny lanitra niady teny amin'ny ranomasina lehibe.
7:3 Ary nisy biby efatra lehibe, mitovy amin'ny iray hafa, niakatra avy tamin'ny ranomasina.
7:4 Ny voalohany dia toy ny liom-bavy, ary nanana ny elatry ny voromahery. Aho no nanatrika ny elany dia nesorin'ny, Ary natsangana tamin'ny tany ka nijanona teo amin'ny tongony tahaka ny lehilahy, ary ny am-pon'ny olona dia homena azy,.
7:5 Ary indro, biby hafa, toy ny orsa, nitsangana teo amin'ny lafiny iray, ary teo koa izy telo andalana ao am-bavany sy ao amin'ny nify, ary niteny azy toy izany: "Mitsangàna, homàna nofo be. "
7:6 Rehefa afaka izany,, nijery, ary indro, hafa koa toy ny leoparda, ary manana elatra tahaka ny vorona, efatra aminy, ary ny efatra loha teo amin'ny bibi-dia, ary nomena hery izany.
7:7 Rehefa afaka izany,, Nijery tamin'ny fahitana amin'ny alina, ary indro, ny fahefatra, biby, mahatahotra nefa mahagaga, ary indrindra mahery; dia nanana nify vy lehibe, mihinana mbola torotoro, ary nanosihosy teo ny sisa amin'ny tongony, fa izany dia tsy tahaka ny biby hafa, izay efa hitany rahateo izany, ary nanana tandroka folo.
7:8 Nodinihiko ny tandroka, ary indro, tandroka kely iray nitsangana avy eo aminy. Ary nisy telo lahy tandroka voalohany dia miorim-paka nivoaka tamin'ny ny fisiany. Ary indro, maso toy ny mason'olona teo amin'ny tandroka ity, sy vava miteny zavatra voajanahary.
7:9 Nijery aho mandra-seza fiandrianana no nanangana, ary ny Hatry ny Ela Be nipetraka. Ny lambany dia namirapiratra tahaka ny oram-panala, ary ny volon-dohany toy ny volon'ondry madio; ny seza fiandrianany dia lelafo, ny kodiarana efa nodorany tamin'ny afo.
7:10 Ny ony ny afo Nihazakazaka nivoaka avy teo anatrehany. Eny, arivo arivo nanompo azy, ary iray alina heny ana hetsiny nanatrika teo anatrehany. Nanomboka ny fitsarana, ary novelarina ny boky.
7:11 Nijery aho noho ny feon'ny teny lehibe izay ilay tandroka niteny, ary hitako fa ny biby efa rava, ary ny tenany dia simba ka efa natolotra mba hodorana amin'ny afo.
7:12 Toy izany koa, ny herin 'ny biby hafa nesorina, ary voafetra taona toy izao dia voatendry ho azy ireo, mandra-pahatongan'ny fotoana iray ary ny iray hafa.
7:13 nijery, noho izany, ao amin'ny fahitana amin'ny alina, ary indro, amin'ny rahon'ny lanitra, nisy toy ny zanak'olona tonga, Ary nanatona ny lalana rehetra ho any amin'ny Nisy Hatry ny Ela, ary dia natolony azy teo anatrehany.
7:14 Ka dia nomeny azy ny hery, sy ny voninahitra, sy ny fanjakana, sy ny vahoaka rehetra, foko, ary ny fiteny hanompo azy. Ny heriny dia hery mandrakizay, izay tsy halaina, ary ny fanjakany, iray izay tsy ho simba.
7:15 Raiki-tahotra ny fanahiko. I, Daniel, dia mahatahotra any ireo zavatra ireo, ary ny fahitan'ny lohako tsaina ahy.
7:16 Dia nanatona ny iray tamin'ireo mpanompo, ary nanontany ny fahamarinana avy aminy izany rehetra izany. Nolazainy tamiko ny hevitry ny teny, Ary nampianatra ahy:
7:17 "Ireo biby lehibe efatra ireo fanjakana efatra, izay hitsangana avy amin'ny tany.
7:18 Nefa dia ny olo-masin'ny Avo Indrindra Andriamanitra, izay no handray ny fanjakana, ary izy ireo dia hanao ny fanjakana amin'ny ity taranaka ity, ary mandrakizay mandrakizay. "
7:19 Rehefa afaka izany,, Te hianatra tsara momba ny biby fahefatra, izay tena tsy mitovy amin'ny rehetra, ary indrindra mahatahotra; ny nifiny sy ny valanoranony vy; sady nihinana sy mangorakoraka, ary ny sisa dia nanosihosy tamin'ny tongony;
7:20 ary ny amin'ny tandroka folo, izay nananany teo amin'ny lohany, sy momba ny hafa, izay efa nisy naniry, talohan'ny izay tandroka telo latsaka, ary momba ilay tandroka nanana maso izay sy vava miteny zavatra mihoa, ary izay mahery kokoa noho ny hafa.
7:21 nijery, ary indro, ilay tandroka nanafika ny olo-masina ka naharesy azy,
7:22 mandra-Efa Nisy Hatry ny andro izany dia niseho ary nanome ny rariny amin'ny olona masina 'ny Avo Indrindra, Ary ny andro tonga, ary ny olona masina nahazo ny fanjakana.
7:23 Ary dia toy izany hoy izy:, "Ilay fahefatra amin'ny biby dia fanjakana fahefatra eto an-tany, izay ho lehibe noho izy rehetra ny fanjakana, ka handrava ny tany rehetra, ary hanosihosy sy hanorotoro azy.
7:24 Koa, ny folo tandroky ny fanjakana ihany no ho mpanjaka folo, Ary ny anankiray koa hitsangana nanaraka ireny, ary izy ho mahery noho ny olona teo anatrehany, ary hampidina mpanjaka telo.
7:25 Ary dia miteny ratsy ny Fara Tampony, Ary ho olona masina manontolo ny Avo Indrindra, dia eritrereto ny zavatra mety haka ny hanova ny andro sy ny lalàna, ary izy ireo dia hatolotra eo an-tànany mandra-pihavin'ny andro, sy ny fotoana, ary antsasaky ny fotoana.
7:26 Ary ny fitsarana dia hanomboka, ka dia ny heriny mba halaina, ary ho torotoro, ary ho Ringana ny lalana rehetra hatramin'ny farany.
7:27 Na izany aza ny fanjakana, sy ny hery, ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana izany, izay eo ambanin'ny lanitra rehetra, dia homena ho an'ny olona ny olona masina izay an'ny Avo Indrindra, ; ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny mpanjaka rehetra dia hanompo sy hanoa Azy. "
7:28 Ary eto no fiafaran 'ny hafatra. I, Daniel, sosotra be i noho ny eritreritro, ary ny toe-po dia niova ato amiko, fa niaro ny hafatra tao am-poko.
8:1 Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Belsazara mpanjaka, nisy fahitana niseho tamiko. Taorian'izay, dia izay efa hitako tany am-piandohana, I, Daniel,
8:2 Nahita tamin'ny fahitako, izay tao an-drenivohitra Sosa, izay ao amin'ny faritra Elama, nefa aho nahita tamin'ny fahitana aho, no mpifehy ny vavahadin'i Olay aho.
8:3 Ary natopiko ny masoko, ka hitako, ary indro, ondrilahy iray nitsangana teo anatrehan'ny honahona, manana tandroka roa, avo, ary ny iray nanan-tombo noho ny hafa, ary mbola mitombo kokoa.
8:4 Rehefa afaka izany,, Hitako ny ondrilahy hamelezany ny tandrony hamely ny West, sy ny Avaratra, sy ny Meridian, ary ny biby tsy nahatohitra azy, na ho afaka amin'ny tànany, ary nanao araka izay sitrapony, ka dia tonga lehibe.
8:5 Ary azoko, ary indro, ny osilahy eo izy osilahy nivoaka avy tany andrefana ambonin'ny ambonin'ny tany manontolo, ka tsy mikasika ny tany. Koa, ny osilahy dia nanana tandroka lehibe indrindra teo anelanelan'ny masony.
8:6 Ary dia lasa ny lalana mankany amin'ilay ondrilahy nanana ny tandrony, dia ilay efa hitako nitsangana eo am-bavahady, ary dia nihazakazaka nankany taminy tao an-keriny ny heriny.
8:7 Ary rehefa nanatona akaiky ny ondrilahy, dia tezitra izy, Ary namely ny ondrilahy, ary nanapaka ny tandrony roa, sy ny ondrilahy tsy nahatohitra azy, ary rehefa nazerany teo amin'ny tany, dia nanitsaka azy, ary tsy nisy olona afaka hanafaka ny ondrilahy tamin'ny tanany.
8:8 Fa ny osilahy eo izy osilahy nanjary lehibe izaitsizy tokoa, ary rehefa nambinina izy, ilay tandrony lehibe vaky, ary ny tandroka efatra no nitsangana ambany izany amin'ny alalan'ny ny rivotra efatry ny lanitra.
8:9 Fa avy amin'ny iray tamin'izy ireo nivoaka tandroka kely iray, ka tonga lehibe tamin'ny Meridian, sy ny Atsinanana, sy ny hery.
8:10 Ary nalaza na dia manoloana ny hery any an-danitra, Ary nazerany ireo ny hery sy ny kintana, ary nanosihosy azy ireo.
8:11 Ary nisy voninahitra, hatrany amin 'ny mpitarika ny hery, Ary nentiny niala taminy ny fanatitra mandrakariva, ary mampiongana ny amin'ny fitoerana masina.
8:12 Ary ny tombony nomena azy hanohitra ny fanatitra isan'andro, noho ny fahotana, sy ny fahamarinana dia ho namely eny an-tany, dia hanao zavatra, ary Izy no hanambina.
8:13 Ary reko ny anankiray tamin'ny olona masina miteny, ary hoy ny masina anankiray hafa, (Tsy fantatro izay dia niteny,) "Inona no haben'ny ny fahitana, ary ny fanatitra mandrakariva, sy ny fahotana izay hahafoanany, izay nitranga, ary ny fitoerana masina sy ny hery, izay ho voahitsakitsaka?"
8:14 Ary hoy izy taminy:, "Hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina, roa arivo sy telon-jato andro, ary toy izany koa ny fitoerana masina, dia hadio. "
8:15 Nefa ny zava-nitranga, rehefa Aho, Daniel, nahita ny fahitana ka nitady fahatakarana fa, indro, dia nitsangana eo imasoko zavatra tahaka ny endriky ny olona.
8:16 Ary nandre ny feon'ny ny olona tao Olay aho, ary niantso nivoaka ka nanao hoe:, "Gabriel, manao ity iray ity ny fahitana. "
8:17 Dia avy izy ka nitsangana teo akaikin'ny toerana dia teo, Ary rehefa nanatona, Dia niankohoka tamin'ny tavako, tora-kovitra, Ary hoy izy tamiko, "Fantaro, zanak'olona, fa amin'ny andro farany ny fahitana ho tanteraka. "
8:18 Ary rehefa niteny tamiko, Dia lavo tamin'ny tany teo nandroso, ary toy izany koa no nanendry ahy sy nitsangana ahy marina.
8:19 Ary hoy izy tamiko, "Izaho dia hanambara aminareo ny hoavy izay zavatra ao amin'ny fahoriana aloha, fa ny andro farany ny manana.
8:20 ilay ondrilahy, izay nahita ny manana tandroka, no mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana.
8:21 Koa, ny osilahy eo izy-osy no mpanjakan'ny ny Grika, ary ny tandroka lehibe, izay teo anelanelan'ny masony, dia tsy miova iray, ny mpanjaka voalohany.
8:22 ary satria, rehefa rava, dia nitombo efatra eo amin'ilay efa niorenany, dia mpanjaka efatra hitsangana avy amin'ny fireneny, nefa tsy mitovy hery.
8:23 Ary araka ny nanjakan'i, rehefa hitombo ny helony tsy, dia hitsangana ny mpanjaka ny tarehy sy mahafantatra zavatra mahamenatra fifampiraharahana.
8:24 Ary ny tombontsoa dia hahazo hery, nefa tsy amin'ny karazana hery, ary hafa noho izay dia ho afaka matoky, Tsy hitsy intsony ny zava-drehetra, ary Izy no hanambina, dia hanao zavatra. Ary hanao ny fahombiazana sy ny vahoakan 'ny olona masina,
8:25 araka ny sitrapony, ary ny fitaka ho tarihin 'ny tanany. Ary ny fony ho inflated, ary noho ny habetsahan'ny zavatra rehetra moa tsy hovonoiny ny maro, ary hitsangana hanohitra ny Tompon'ny tompo, ary ho nandondòna teo ivelan'ny tanana.
8:26 Ary ny fahitana ny amin'ny hariva sy ny maraina, izay nilaza, marina. Noho izany, tsy maintsy kase ny fahitana, satria, rehefa ela, dia hitranga. "
8:27 Sy izaho, Daniel, Reraky ka nandraiky narary andro vitsivitsy, ary rehefa nanandratra ny tenako aho, efa niakatra, Aho, nahatanteraka ny mpanjaka asa, ary ka aho ny amin'ny fahitana, nefa tsy nisy nahalaza izay heviny izany.
9:1 Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa, ny zanak'i Ahasoerosy, avy amin'ny taranaky ny Mediana, izay nanapaka ny fanjakan'ny Kaldeana,
9:2 amin'ny taona iray nanjakany, I, Daniel, nahalala ao amin'ny boky ny isan'ny taona, momba ny tenin'i Jehovah Izay tonga tamin'i Jeremia, ny mpaminany, fa ny fandravana an'i Jerosalema ho vita tamin'ny fito-polo taona.
9:3 Ary ny tavako ho an'ny Tompo, Andriamanitra ô, mba mangataka sy mifona amin'ny fifadian-kanina, sy ny lamba fisaonana, ary ny lavenona.
9:4 Ary nivavaka tamin'ny Tompo, Andriamanitra ô, ary niaiky, ka hoy izaho:, "Miangavy anao aho, Andriamanitra Tompo ô, lehibe sy mahatahotra, fiarovana ny fanekena sy ny famindram-po ho amin'izay tia anao sy mitandrina ny didinao.
9:5 Efa nanota, dia nanao meloka, izahay nanao zavatra impiously ary efa niala, ary izahay dia efa niala tamin'ny didinao ary koa ny didim-pitsaranao.
9:6 Izahay no tsy nihaino ny mpanomponao, ny mpaminany, izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay, ny mpitarika, razantsika, ary ny vahoaka rehetra amin'ny tany.
9:7 Ho anao, Tompo O, dia ny rariny, fa ho antsika dia hangaihay, araka ny amin'izany andro izany ary ny lehilahy amin'ny Joda,, ary ny mponina any Jerosalema,, ary ny Isiraely rehetra, ho an 'ireo izay akaiky sy ireo izay lavitra, amin'ny rehetra ny tany mba izay nandroahako, azy, noho ny helony izay efa nanota taminao.
9:8 Tompo O, ho amintsika an'ny hangaihay: ho an'ny mpanjaka, ny mpitarika, sy ny razanay, izay efa nanota.
9:9 Fa ho anao, ny Tompo Andriamanitsika, ny famindram-po ary ny Sorompanavotana, fa efa lasa niala taminareo,
9:10 fa izahay no tsy nihaino ny feon 'ny Tompo, Andriamanitsika, ka nandeha araka ny lalàna, izay naorina ho antsika amin'ny alalan'ny mpanompony, ny mpaminany.
9:11 Ary ny Isiraely rehetra efa nandika ny lalànao ka efa niova ho lasa, tsy mihaino ny feonao, ary toy izany koa ny fanamelohana sy ny ozona, izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, efa nandatsaka aminay, satria efa nanota taminy.
9:12 Ary efa nahatanteraka ny teniny, izay efa nolazainy anay sy ny mpitarika antsika izay nitsara anay, mba hitarika over-doza lehibe izahay, toy izay tsy mbola nisy ambanin'ny lanitra rehetra, araka izay efa natao tany Jerosalema.
9:13 Fotsiny araka izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, izao loza rehetra efa nanjo anay, ary tsy miangavy ny tavanao, Ry Tompo Andriamanitray, mba hahafahantsika hiverina amin'ny helokay sy hihevitra ny fahamarinanao.
9:14 Ary Jehovah niambina ny loza ary nitondra azy ho anay; ny Tompo, Andriamanitsika, marina amin'ny asany rehetra, izay efa vita, Fa isika tsy nihaino ny feony.
9:15 Ary ankehitriny, Tompo O, Andriamanitsika, Izay efa nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tanana mahery ka nanao anarana ianao araka androany: efa nanota izahay, efa nanao ratsy.
9:16 Tompo O, ho an'ny rehetra ny fahamarinanao, miala, Miangavy anao aho, ny fahatezeranao sy ny fahatezerana avy amin'ny tanàna, Jerosalema, ary avy an-tendrombohitrao masina. Fa, noho ny fahotanay sy ny heloky ny razanay, Jerosalema sy ny olonao dia latsa amin'izay rehetra manodidina antsika izay.
9:17 Ankehitriny, noho izany, mitandrema, Andriamanitra ô, ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fangatahana, ary maneho ny tavanao noho ny fitoerana masina, izay efa lao, noho ny tenany ihany.
9:18 Atongilano ny sofinareo, O Andriamanitro, ka mandrenesa, ahirato ny masonao, ka jereo ny fandravana sy ny tanàna momba ny hoe iza ny anaranao no hampiharina. Fa tsy ny alalan 'ny fanamarinana fa manolotra ny fangatahana eo anatrehanao, fa ny alalan 'ny fahafenoan' ny fangoraham-po.
9:19 mitandrema, Tompo O. ho faly, Tompo O. Mihodina ary asa. Aza mangataka andro, noho ny tenany ihany, O Andriamanitro, fa ny anaranao no hampiharina, raha manao ny tanàna sy ny olonao. "
9:20 Ary raha mbola mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako, Ary izay fahotan'ny oloko, Isiraely, ny vavaka sy ny fanatitra hohanina eo imason 'Andriamanitro, ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitro Andriamanitro,
9:21 araka izay mbola niteny nivavaka, indro, ilay lehilahy Gabriela, izay efa nahita tao amin'ny fahitana voalohany, manidina haingana, nanendry ahy tamin'ny fotoan'ny fanatitra hariva.
9:22 Ary nandidy ahy, Ary niteny tamiko ka nanao hoe:, "Ankehitriny, Daniel, Izaho no nivoaka mba hampianatra anareo sy mba hanampiana anao hahatakatra.
9:23 Am-piandohan'ny ny vavaka, ny hafatra nivoaka, nefa izaho efa tonga nanazava izany aminao satria ianao dia olona izay mitady. Noho izany, tsy maintsy mifantoka loatra amin'ny ilay hafatra, ary ho fantatrao ny fahitana.
9:24 Fito-polo herinandro no nifantoka ny taona ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ka fahadisoana no ho vita, sy ny fahotana, dia hahatratra ny farany, sy ny helony dia ho amin'ny tondro-molotra, ary mba mandrakizay ny rariny ho entina any, sy ny fahitana sy ny faminaniana, dia ho tanteraka, ary ny olo-masin'i olona masina dia ho voahosotra.
9:25 Noho izany, hahafantatra sy mitandrema: hatramin'ny hivoahan'ny ny teny mba Manangana an'i Jerosalema indray, mandra-Kristy mpitarika, dia hisy fito herinandro ny taona, ary ny roa amby enim-polo herinandro ny taona; ary ny sakany dia lalana hatsangana intsony, ary ny rindrina, amin'ny fotoam-tebiteby.
9:26 Ary rehefa afaka ny roa amby enim-polo herinandro ny taona, mpitarika ny Kristy dia hatao maty. Ary ny olona izay nandà Azy, dia tsy ho azy. Ary ny olona, mpitondra azy ireo, rehefa tonga, dia handrava ny tanana sy ny fitoerana masina. Ary ny farany dia ho fandravana, ary, araka ny fiafaran 'ny ady, ny fandravana dia nanangana.
9:27 Fa izy no hanamarina ny fanekena ho herinandro maro ny taona; ary ny antsasaky ny herinandro ny taona, lasibatra hamono zavatra hatao fanatitra ho efa ho hitsahatra; fa hisy an-kianjan'ny tempoly ny fahavetavetan'ny fandravana. Ary ny fandravana dia hitohy hatrany ny consummation sy ny farany. "
10:1 Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Kyrosy, mpanjakan'ny ny Persianina, hafatra nisy nambara tamin'i Daniela, atao hoe Beltesazara, ary ny tena teny, ka mafy ny hery. Ary tsara ny hafatra, ny fahalalana ilaina amin'ny fahitana.
10:2 Ary tamin'izany andro izany, I, Daniel, nisaona nandritra ny telo herinandro ny andro.
10:3 Aho, tsy nihinan-kanina mahafinaritra, ary tsy hena, na divay, niditra ny vavako, sady tsy nisy I voahosotra-menaka manitra, mandra-telo herinandro ny andro no vita.
10:4 Fa tamin'ny andro fahefatra amby roa-polo tamin'ny volana voalohany, Aho akaikin'ny ony lehibe, dia ny Tigra.
10:5 Ary natopiko ny masoko, ary hitako fa, indro, ary indro, ny lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ary ny valahany nisikinany-bolamena tsara indrindra,
10:6 ary ny tenany dia tahaka ny vato volamena, ary ny tavany dia nanana ny endriky ny tselatra, ary ny masony dia ny fanilo mirehitra, sy ny sandriny sy izay rehetra midina ny lalana mahazo manao amin'ny tongotra dia ny tarehin'ny namirapiratra barahina, ary ny miteny feony dia tahaka ny feon'olona maro be.
10:7 Fa Izaho, Daniel, ihany no nahita ny fahitana, fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa ny fampahatahorana lehibe izaitsizy tokoa Nihazakazaka azy, ka dia nandositra niafina.
10:8 Sy izaho, rehefa irery ihany no sisa, nahita izany fahitana lehibe izany, ary tsy nisy hery nitoetra tato anatiko, koa, ny tarehiny niova ny toetry, ary Reraky, tsy manana hery izay.
10:9 Ary nandre ny feon 'ny teny, Ary nony nandre, Izaho manolotra ny amin'ny fifanjevoana amin'ny tavako, ary ny tavako dia akaiky tamin'ny tany.
10:10 Ary indro, nisy tanana nanohina ahy, ka nanangana ahy teo ny handohalika sy ny knuckles tanako.
10:11 Ary hoy izy tamiko, "Daniel, olona ny faniriana, fantaro ny teny Izay lazaiko aminao, ka mijoroa mahitsy ny tenanao, Fa izaho dia nirahina ho atỳ aminareo. "Ary rehefa nilaza izany teny izany tamiko, Nitsangana nangozohozo teo aho.
10:12 Ary hoy izy tamiko, "Aza matahotra, Daniel, fa hatramin'ilay andro voalohany izay hametraka ny fonao hahalala, amin'ny alalan'ny nampahory ny tenanao eo imason 'Andriamanitrareo, Ny teninareo dia nanaraka, ary efa tonga noho ny teny.
10:13 Fa ny mpitarika ny fanjakana Persia nanohitra ahy ho amby roa-polo andro, ary indro, Michael, iray amin'ireo mpitarika ny Kilonga, no tonga hanampy ahy, ary nijanona teo akaikin'ny mpanjakan'i Persia.
10:14 Fa tonga Aho hampianatra anareo izay hanjo ny firenenao any am-parany, fa ny fahitana dia nandritra ny fotoana ela manomboka izao. "
10:15 Ary raha mbola niteny teny ho ahy amin'izao lalana, Dia nanipy ny tavako ho lavo tamin'ny tany ka mangina.
10:16 Ary indro, zavatra, naka ny endriky ny zanak'olombelona nanendry ny molotro. Avy eo, eo am-piandohan'ny ny vavako, Aho niteny ka nanao taminy izay nitsangana teo anatrehako, "Tompoko, noho ny fahitana ny aminareo, ny ratsam-batany dia tonga malemy sy efa tsy nisy hery nitoetra tato anatiko.
10:17 Ary noho izany, Ahoana no ahazoan'ity izaho mpanompon'ny tompoko tompoko hiteny amin'Andriamanitra? Fa tsy misy hery mitoetra ao amiko; ary na dia ny fifohana rivotra no voasakana. "
10:18 Noho izany, izay nijery toy ny olona, nanendry ahy indray ka nampahery ahy.
10:19 Ary hoy izy:, "Aza matahotra, Ry lehilahin'Andriamanitra maniry. Fiadanana ho anareo. Raiso herim-po sy mahereza. "Ary rehefa niteny tamiko, I sitrana, ka hoy izaho:, "Mitenena, tompoko, satria efa nampahery ahy. "
10:20 Ary hoy izy:, "Tsy fantatrao hoe nahoana aho tonga eto aminao? Ary nanarakaraka, dia hiverina Aho, hiady amin'ny mpitarika ny Persianina. Rehefa niala aho, dia niseho ny mpitarika ny Grika tonga.
10:21 Fa, amin'ny fahamarinana, No toriko aminareo izay voalaza ao amin'ny soratra marina. Ary tsy misy olona no mpanampy ahy amin'izany rehetra izany, afa-tsy Mikaela ny mpitarika. "
11:1 "Ary noho izany, hatramin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa Mediana, I nivadika, ka mba ho fanamafisana sy hahazo hery.
11:2 Ary ankehitriny, dia hanambara aminareo ny marina. Indro, niakatra ho any amin-teboka, hisy mpanjaka telo hitsangana any Persia, ary ny fahefatra hanan-karena dia ho eo amin'ny fitondrana indrindra mihoatra noho izy rehetra. Ary rehefa nitombo tamin'ny loharano mahery, dia manaitra ny rehetra hamely ny fanjakan'i Gresy.
11:3 Fa tsy hitsangana mafy mpanjaka, ary izy hiara-manjaka tamin'ny hery lehibe, dia hanao izay sitraky.
11:4 Ary rehefa efa mafy orina, ny fanjakany dia ho rava ka hozaraina ho any amin'ny rivotra efatry ny lanitra, fa tsy ho an'ny taranany, na araka ny heriny izay nanjakany. Fa ny fanjakany ho triatra ka nomontsaniny, na ho an'ny vahiny izay efa voaroaka avy amin'ireo.
11:5 Ary ny mpanjakan'ny atsimo dia nanamafy, nefa ny iray tamin'ireo mpitarika no hanjaka eo aminy, ary izy hiara-manjaka amin'i harena, fa mafy ny sehatra.
11:6 Ary rehefa afaka taona vitsivitsy,, izy ireo dia hanangana ny federasiona, ary ny zanakavavin'ny mpanjakan'ny atsimo ho tonga any amin'ny mpanjakan'ny avaratra mba finamanana, nefa tsy hahazo ny herin'ny fitaovam-piadiana, Ary tsy ny zanany mafy orina, dia hatolotry, miaraka amin'ireo nitondra azy, zanany lahy, ary ireo izay nampahery azy tamin'izany fotoana izao.
11:7 Ary ny taova avy amin'ny itsiriany ny amin'ny fakany hitsangana, ary ho avy ny miaramila, ary hiditra ao amin'ny faritanin'i ny mpanjakan'ny avaratra, dia hanararaotra azy, ary Mihazona azy mafy izy.
11:8 Ary, ankoatry ny, dia ho entiny ho babo any Ejipta ny andriamaniny, ary ny sarin-javatra voasokitra, ary toy izany koa ny sarobidy fanaka volamena sy volafotsy. Izy no haharesy ny mpanjakan'ny avaratra.
11:9 Ary ny mpanjakan'ny atsimo, no hiditra ao amin'ny fanjakan'ny, ka hiverina ho any amin'ny taniny.
11:10 Fa ny zanany lahy ho fanamby, ka vorio maro be dia maro indrindra tafika. Ary ho tonga rivotra sy pofoanareo. Ary ho hiamboho, ary ho romotra, dia hanatevin-daharana ny ady amin'ny redness.
11:11 Ary ny mpanjakan'ny atsimo, rehefa ho fanamby, dia hivoaka ka hiady amin'ny mpanjakan'ny avaratra, ary izy hanamboatra ny vahoaka betsaka indrindra, ary ny vahoaka dia hatolotra eo an-tànany.
11:12 Ary izy nisambotra ny vahoaka, ary ny fony hasandratra, dia nazera an'arivony maro, nefa tsy haharesy.
11:13 Fa ny mpanjakan'ny avaratra dia hanova tetika ary dia hanomana olona maro be mihoatra lavitra noho eo anatrehan'i, Ary amin'ny faran'ny andro sy ny taona, dia maika handroso amin 'ny tafika lehibe sy loharanon-karena lehibe indrindra.
11:14 Ary amin'izany andro, maro no hitsangana hamely ny mpanjakan'ny atsimo. Ary toy izany koa ny zanaky ny mpamitaka eo amin'ny firenenao dia hanandratra ny tenany, mba hahatanteraka ny fahitana, ka dia hirodana.
11:15 Ary ny mpanjakan'ny avaratra, dia ho tonga sy ho fitaterana ny asa fanaovana fahirano, dia nisambotra ny tanàna voaro mafy indrindra. Ary ny fitaovam-piadiana any amin'ny tany atsimo, dia tsy nahatohitra azy, Ary ny olom-boafidiny hitsangana hanohitra, fa ny hery dia tsy.
11:16 Ary rehefa tonga, dia hanao araka izay sitraky, ary tsy hisy izay mitsangana hanohitra ny tavany. Ary dia mitsangàna eo amin'ny tany miavaka, Ary ho levona ny tànany.
11:17 Ary hampitoetra ny tavany mba miezaka hanao ny fanjakany manontolo, ary izy hanao toe-piainana ara-drariny niaraka taminy. Ary Izy no hanome azy vavy amin'ny vehivavy, mba handrava azy. Anefa izy, dia tsy haharitra, Ary tsy ravehivavy ho azy.
11:18 Ary dia hitodika mankany amin'ny nosy, dia nisambotra maro. Ary Izy no mahatonga ny mpitondra ny latsa mba hitsahatra, ary ny latsa izay nentiny ho niverina ho azy.
11:19 Ary dia hitodika any amin'ny fanjakana ny taniny, dia hamely, ka handrava, nefa tsy hahomby.
11:20 Ary hitsangana teo amin'ny fitoerany iray izay tena misy vidiny sy tsy mendrika ny manjaka voninahitra. Ary tamin'ny fotoana fohy, dia ho reraka, nefa tsy amin'ny fahatezerana, na amin'ny ady.
11:21 Ary hitsangana eo amin'ny toerany ny maharikoriko iray, ka tsy ho voatendry ny voninahitry ny mpanjaka. Ary ho tonga ao amin'ny miafina, dia hahazo ny fanjakana amin'ny alalan'ny famitahan'ny.
11:22 Ary ny sandrin'ny ny ady ho herisetra eo anatrehany sady ho rava, ary, ankoatry ny, ny mpitarika ny federasiona.
11:23 Ary, rehefa avy manao namana, Izy no namitaka azy, dia hiakatra ka handresy ny olona amin'ny kely.
11:24 Ary manan-karena, no hiditra ao, ary mikaroka tanàna, dia hanao izay tsy nataon'ny razany, na ny razany. Izy no hanely ny babo, sy ny babo, ary ny hareny, ary mamorona drafitra iray manohitra ny famindram-tena, ary izany dia mandra-pihavin'ny andro.
11:25 Ary ny heriny sy ny fony ho tezitra ny mpanjakan'ny atsimo amin'ny miaramila maro. Ary ny mpanjakan'ny atsimo dia ho tezitra eo an handeha hiady, rehefa maro ny mpiara-dia aminy sy ny toe-javatra tsara indrindra, kanefa ireo dia tsy haharitra, fa izy no hanangana ny drafitra hamely azy.
11:26 Ary ireo izay miaraka aminy hihinan-kanina dia hanorotoro azy, ary ny miaramilany dia ho foanana, ary dia maro indrindra ho faty, rehefa novonoina ho faty.
11:27 Ary ny fon'ny mpanjaka roa dia ho toy izany koa, ny manao ratsy, ary izy ireo hiteny lainga an-databatra iray, nefa tsy hahomby, satria mbola ny farany ho an'ny fotoana iray hafa.
11:28 Ary hiverina ho any amin'ny taniny mitondra harena maro. Ary ny fony dia hanohitra ny fanekena masina, dia hanao zavatra, dia hiverina ho any amin'ny taniny.
11:29 Amin'ny fotoana voatondro, dia hiverina, dia hanatona ny Atsimo, fa ny fotoana farany dia tsy ho toy ny teo aloha.
11:30 Ary ny sambo mpiady grika ary ho avy ny Romana aminy, dia ho nandefona, ary hihemotra, ary hanana faneso manohitra ny Testamenta ao amin'ny fitoerana masina, dia hanao zavatra. Dia hiverina ary mijery ny fahavalony, izay nahafoy ny faneken'i ao amin'ny fitoerana masina.
11:31 Ary ny fitaovam-piadiana dia haka ny lafiny, ka handoto ny fitoerana masina, ny hery, ka hanaisotra ny sorona isan'andro ary manolo izany amin'ny ny fahavetavetan'ny fandravana.
11:32 Ary ny ratsy fanahy ao amin'ny Testamenta dia manahaka fitaka, fa ny olona, mahalala Andriamaniny, dia foana ka hanao zavatra.
11:33 Ary ny mpampianatra ao amin'ny olona dia hampianatra ny maro, fa dia ho simba ny sabatra, sy amin'ny afo, sy ny babo, ary ny herisetra nandritra ny andro maro.
11:34 Ary rehefa lavo izy, dia tohanana amin'ny fanampiana kely, fa maro no mihatra amin'izy ireo fitaka.
11:35 Ary ny sasany tamin'ny nianatra dia ho simba, mba ho hirehitra sy voafidy ary nodioviny koa, niakatra ho any amin'ny fotoana efa voafaritra mialoha, satria mbola hisy ny fotoana hafa koa.
11:36 Ary ny mpanjaka dia hanao zavatra araka ny sitrapony, dia haorina, dia ho amin'izay rehetra Nidera andriamanitra. Ary hiteny zava-dehibe manohitra ny Andriamanitry ny andriamanitra, dia hifehy, mandra-passion vita. Raha vao tanteraka, dia tonga ny fetra azo antoka.
11:37 Ary dia hanome aza manahy ny amin'ny Andriamanitry ny razany,, ary izy no ho eo ny fitiavan'ny vehivavy;, dia tsy hanatrika ny misy andriamanitra, satria hitsangana hanohitra ny zava-drehetra.
11:38 Fa izy no hiankohofanao ny andriamanitra Maozim nandimby azy, ary, andriamanitra razany izay tsy fantatrao, dia hanompo Azy amin'ny volamena, ary ny volafotsy, ary vato soa, sy ny zavatra lafo vidy.
11:39 Ary dia manao zavatra mba hanamafisana Maozim amin'ny vahiny andriamanitra, izay efa lasa saina, dia hitombo ny voninahiny, ary hanome azy fahefana hamoaka maro, dia mizara maimaim-poana tany.
11:40 Ary, tamin'ny fotoana efa voafaritra mialoha, ny mpanjakan'ny atsimo no hiady hamely azy, ary ny mpanjakan'ny avaratra kosa ho avy hamely azy toy ny tafio-drivotra, tamin'ny kalesy, sy mpitaingin-tsoavaly, ary miaraka amin'ny andian-tsambo lehibe, dia hiditra any an-tany, ka hanorotoro sy mandalo.
11:41 Ary izy no hiditra ao amin'ny tany mahafinaritra, ary maro no ho lavo. Fa ireo ihany no ho voavonjy amin'ny tànany: edoma, sy Moaba, sy ny tapany voalohany amin'ny taranak'i Amona.
11:42 Ary dia nanipy ny tànany amin'ny tany, ary ny tany Egypta tsy ho afa-mandositra ho.
11:43 Ary izy no hitondra ny harena tratrany volamena, ary ny volafotsy, ary ny zava-tsoan'ny tany Egypta, ary toy izany koa izy handeha hamaky Libya sy Etiopia.
11:44 Sy filazana avy any atsinanana sy avy any avaratra dia tahotra azy. Ary ho tonga amin'ny vahoaka betsaka handringana sy hampihatra maro.
11:45 Ary izy hamehezany ny tabernakely, lay, eo anelanelan'ny ranomasina, eo ho malaza sy ny tendrombohitra masina, ary ho avy hatrany ny fihaonana an-tampony, ary tsy hisy olona hanampy azy. "
12:1 "Fa amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, ny lehibe mpitarika, izay mitsangana ho amin'ny zanaky ny firenenao. Ary ao ny andro ho avy, toy izay tsy mbola nisy hatramin'ny andro firenena nanomboka, na dia mandra-pahatongan'ny andro izany. Ary, tamin'izany fotoana izany, Ny firenenao no ho voavonjy, rehetra izay ho hita voasoratra ao amin'ny boky.
12:2 Ary maro izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha: ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny olon-kafa ho fandatsa fa hahita foana.
12:3 Fa ireo izay efa nampianatra dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary ireo izay hampianatra ny maro mankany amin'ny rariny, tahaka ny kintana mandrakizay ho an'ny tsy manam-pahataperana.
12:4 fa ianareo, Daniel, hanakatona ny hafatra, ary asio tombo-kase ny boky, mandra-pahatongan'ny fotoana orina. Maro handeha hamaky, sy fahalalana no nitombo. "
12:5 Sy izaho, Daniel, nijery, ary indro, toy izany koa roa hafa nitsangana, iray over eto, eo amoron'ny ony, ary ny anankiray ny any, etsy amoron'ny ony,.
12:6 Ary niteny tamin-dralehilahy, izay nitafy rongony fotsy, izay nitsangana teo ambonin'ny rano amin'ny ony, "Mandra-pahoviana no ambara-pahatongan'ny faran'ireo fahagagana ireo?"
12:7 Ary reko ilay lehilahy, izay nitafy rongony fotsy, izay nitsangana teo ambonin'ny rano amin'ny ony, rehefa nanandratra ny tànany ankavanana sy ny tànany ankavia ho amin'ny lanitra, ary efa nianiana tamin'ny Izay velona mandrakizay, fa ho mandritra ny fotoana kelikely, sy ny fotoana, ary antsasaky ny fotoana. Ary rehefa niparitaka ny tànan'ny olona masina vita, ireo zavatra rehetra ireo dia ho vita tanteraka.
12:8 Ary nahare aho, ka tsy azoko. Ary hoy izaho:, "Tompoko, inona no ho afaka izany zavatra izany?"
12:9 Ary hoy izy:, "Mandehana, Daniel, fa efa mihidy ny teny sy nasiana tombo-kase mandra-pahatongan'ny fotoana efa voafaritra mialoha.
12:10 Maro no ho voafidy ary nodioviny koa, ary, toy ny hoe afo, dia ho pitsapana, ary ny ratsy fanahy hanao zavatra impiously, ary tsy ny ratsy fanahy dia hahatakatra, nefa ny mpampianatra dia hahatakatra.
12:11 Ary hatry ny fony mandrakariva fanatitra dia halaina ary ny fahavetavetan'ny fandravana no nanangana, dia hisy arivo andro sivi-folo amby roan-jato.
12:12 Sambatra izay miandry sy mahatratra hatramin'ny arivo telo-polo amby telon-jato-dimy andro.
12:13 fa ianareo, mandeha, mandra-pahatongan'ny fotoana efa voafaritra mialoha, dia ho sasatra ka hijoro eo amin'ny toerana nomena amin'ny faran'ny andro.
13:1 Ary nisy lehilahy monina ao Babylona, ary ny anarany dia Joakima.
13:2 Ary izy nandray vady atao hoe Susanna, ny zanakavavin'i Hilkia, izay tena tsara tarehy sy matahotra an'Andriamanitra.
13:3 Fa ny ray aman-dreniny, satria olo-marina izy ireo, efa nahita fianarana ny zanany vavy, araka ny lalàn 'i Mosesy.
13:4 Fa nanan-karena be Joakima, ary nanana ny saham-boankazo teo akaikin'ny tranony, ary ny Jiosy nirohotra taminy, satria izy no be voninahitra noho izy rehetra.
13:5 Ary ny anti-panahy roa mpitsara efa voatendry teo anivon 'ny vahoaka taona, momba izay tian'i Jehovah hoe, "Ny heloka efa tonga avy tany Babylona, avy amin'ny anti-panahy mpitsara, izay toa mitondra ny vahoaka. "
13:6 Ireo falehan'ny an-tranon'i Joakima, ary tonga tany izy rehetra, izay mila ny fitsarana.
13:7 Fa raha ny olona niala tamin'ny mitataovovonana, Sozana niditra ka nandeha manodidina amin'ny vadiny ny saham-boankazo.
13:8 Ary ny anti-panahy nahita azy miditra sy mandeha manodidina isan'andro, ka dia harehitry amin'ny faniriana manoloana ny.
13:9 Ary nivilivily tamin'ny antony sy niala ny masony, ka tsy mijery ny any an-danitra, ary tsy hahatsiaro izay fitsarana marin'Andriamanitra.
13:10 Ary toy izany koa izy ireo dia samy naratra noho ny fitiavana azy, nefa tsy manambara ny alahelony ny iray hafa.
13:11 Fa menatra izy ireo mba hanambara amin'izy samy izy ny faniriany, te-handry aminy.
13:12 Koa araka izany ny niambina tsara isan'andro mba hahita azy. Ary hoy ny anankiray hafa,
13:13 "Andeha isika ho any an-trano, Fa izao no sakafo atoandro ny fotoana. "Ary nivoaka, nony niala mifankahita.
13:14 Ary niverina indray, rehefa tonga teo amin'ny toerana iray ihany, ary, samy mangataka ny hafa ny antony, Niaiky izy ireo ny faniriany. Ary avy eo izy ireo nanaiky ny hametraka ny fotoana izy ireo dia ho afaka hahita azy irery.
13:15 Ary nony, raha mbola nijery izy ireo ho manararaotra ny andro, fa niditra amin'ny fotoana manokana, toy ny omaly sy ny andro mialoha, amin'ny mpiasa an-trano roa ihany, ary te hanasa ao amin'ny saham-boankazo, satria nisy izany mafana.
13:16 Ary tsy nisy teo, afa-tsy ny anti-panahy roa niafina, ka dia nianatra azy.
13:17 Ary noho izany dia hoy izy tamin'ny mpiasa an-trano, "Itondray diloilo sy menaka manitra, dia narindriny ny varavarana amin'ny saham-boankazo, ka mba hanasana. "
13:18 Ary nanao araka izay nandidian'i izy ireo. Ary dia nohidiana ny varavarana amin'ny saham-boankazo sy ny sisa amin'ny alalan'ny varavarana indray mba haka izay dia tsy nila, ary tsy fantany fa efa niafina ny anti-panahy ao anatin'ny.
13:19 Fa raha ny mpiasa an-trano efa lasa, ny anti-panahy roa sy nitsangana ho azy haingana, ka hoy izy:,
13:20 "Indro, ny varavaran'ny ny saham-boankazo no mihidy, ary tsy misy olona afaka mahita antsika, ary isika ao faniriana ho anao. Noho ireo zavatra ireo, fanekena amintsika ka mandry aminay.
13:21 Fa raha tsy, dia hijoro ho vavolombelona hiampanga anareo fa tovolahy tatỳ aminareo ihany, ary, izany no antony, ny nanirahanao ny mpiasa an-trano lavitra anao. "
13:22 Nisento Sozana ka nanao hoe:, "Izaho nakatona in manodidina. Fa raha manao izany zavatra izany, izany no fahafatesana ho ahy; Fa raha tsy manao izany, Dia tsy ho afa-mandositra ny tànanareo.
13:23 Saingy fa tsara ho ahy voatery ho lavo eo an-tananao, toy izay hanota eo anatrehan'ny Tompo. "
13:24 Ary Sosana niantso tamin'ny feo mahery, fa ny anti-panahy ihany koa niantsoantso hamely azy.
13:25 Ary ny anankiray tamin'izy ireo nandeha faingana ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano 'ny saham-boankazo, ary nosokafany izany.
13:26 Ary noho izany, raha avy ny mpanompon-trano nandre ny fitarainan'ny tao amin'ny saham-boankazo, dia nirohotra tao amin'ny varavarana indray mba hijery izay nitranga.
13:27 Rehefa zoki-olona izay efa nolazain'i, ny mpanompo dia afa-baraka loatra, fa mbola tsy nisy na inona na inona toy izany momba Susanna. Ary nony tamin'ny andro manaraka,
13:28 raha ny olona tonga Joakim vadiny, fa roa ihany koa ny anti-panahy tonga, drafitra feno ratsy fanahy an'i Susanna, , mba hamonoana azy ho faty.
13:29 Dia hoy izy teo anatrehan'ny olona, "Alefaso for Susanna, zanakavavin'i Hilkia, ny vadin'i Joakima. "Ary avy hatrany dia naniraka azy.
13:30 Dia tonga tamin'ny ray aman-dreniny, ary ny zanany, ary ny havany rehetra.
13:31 Koa, Susanna marefo fatratra tokoa sy tsara tarehy.
13:32 Fa ireo ratsy fanahy dia nandidy fa ny tarehiny dia tokony hiseho, (fa izy no nanarona,) ka dia, fara fahakeliny, mba ho afa-po amin'ny hatsaran-tarehiny.
13:33 Noho izany, azy manokana ary izay rehetra nahalala azy nitomany.
13:34 Kanefa ny anti-panahy roa, nitsangana teo afovoan'ny vahoaka, hametraka ny tànany amin'ny lohany.
13:35 ary nitomany, dia nandinika ny lanitra, fa ny fony nino ny Tompo.
13:36 Ary hoy ny anti-panahy, "Raha mbola niresaka izahay dia mandeha amin'ny saham-boankazo irery, ity iray ity dia tonga tao amin'ny mpiasa an-trano roa, sady nakatony ny varavarana amin'ny saham-boankazo, ary dia naniraka ny mpiasa an-trano hiala ao,.
13:37 Ary nisy tovolahy nanatona azy, izay tao amin'ny miafina, Ary firaisana taminy.
13:38 Koa, satria izahay tao amin'ny takona izany ny saham-boankazo, nony nahita ity ratsy, dia nihazakazaka miakatra ho azy ireo, ary nahita azy ireo niara-consorting.
13:39 Ary, tokoa, izahay tsy afaka hamandrika Azy, satria izy no mahery noho isika, ary eo am-piandohan'ny ny varavarana, dia nitsambikina avy.
13:40 Fa, satria efa nahazo ity iray ity, dia nangataka ho fantatsika hoe iza ilay tovolahy dia, fa izy kosa dia tsy nety hilaza aminay. Momba izany, ary vavolombelon'izany izahay. "
13:41 Nino azy ireo ny vahoaka, fotsiny toy ny hoe izy ireo anti-panahy sy ny mpitsara ny vahoaka, ary nanameloka azy ho faty.
13:42 Susanna Fa niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe:, "Andriamanitra Mandrakizay, iza no mahalala izay miafina, izay mahafantatra ny zavatra rehetra alohan'ny nitranga,
13:43 fantatrao fa samy miteraka lainga ahy, ary indro, Izaho ho faty, na dia tsy nanao izany zavatra izany, izay efa nanala baraka ireo lehilahy ireo noforonina hamely ahy. "
13:44 Kanefa ny Tompo nihaino ny feony.
13:45 Ary rehefa natao nentina ho faty, ary Jehovah nanangana ny fanahy masina ny tanora zazalahy, atao hoe Daniel.
13:46 Ary niantso tamin'ny feo mahery, "Izaho madio ny ran 'ity iray ity."
13:47 Ary ny olona rehetra, niverina nankany aminy, nanao hoe:, "Ahoana izao teny izao fa ianao hoe:?"
13:48 fa, raha mbola nijoro teo afovoany izy ireo, nanao hoe:, "Ianao ve no adala, zanak'i Isiraely, fa tsy mitsara sy tsy mahalala izay ny marina dia, efa nanameloka ny zanakavavin'i Isiraely?
13:49 Miverena any amin'ny fitsarana, satria efa niteny lainga vavolombelona hiampanga azy. "
13:50 Noho izany, ny olona niverina haingana, ary zoki-olona nanao taminy hoe:, "Avia, ka mipetraha eo anivontsika ary mampiseho antsika, satria Andriamanitra dia nanome anao ny voninahitry ny fahanterana. "
13:51 Ary hoy izy taminy Daniel, "Hahasaraka ireo teny lavitra avy amin'ny hafa, ary hotsaraiko ny adin'ny azy ireo. "
13:52 Ary noho izany, rehefa nisara-tsaina, ny iray avy amin'ny hafa, Dia niantso ny iray tamin'izy ireo, ka hoy izy taminy:, "Ianareo lalim-paka ratsy fahiny, ankehitriny ny fahotanareo no tonga avy, izay efa nataon'ny olona talohanareo,
13:53 mitsara tsy ara-drariny ny fitsarana, mampahory ny tsy manan-tsiny, sy mametraka hanafaka ny meloka, na dia hoy ny Tompo, 'Ny tsy manan-tsiny sy ny marina dia tsy maintsy tsy hatao maty.'
13:54 Koa ankehitriny, raha nahita azy, hanambara ambanin'ny hazo ianao izay nahita azy ireo niara-niresaka. "Hoy izy hoe, "Teo ambany hazo Mastic ny Evergreen."
13:55 Ary Daniela nanao hoe:, "Marina tokoa fa, efa nandainga hamely lohanao ihany. Fa, indro, Ilay Anjelin'Andriamanitra, rehefa nahazo ny didy avy aminy, dia namaky anao midina eo afovoany.
13:56 Ary, rehefa nanao Azy hitanila kely, Izy nandidy ny hafa mba hanatona, ka hoy izy taminy:, "Ry taranaky ny Kanana, fa tsy Joda, hatsaran-tarehy no namitaka anao, sy ny faniriana nampivily ny fonao.
13:57 Toy izany no hataonao amin'ny zanakavavin'ny Israely, ary izy ireo, noho ny tahotra, nanampy ho isan'ny mpianatr'i ianao, fa ny zanakavavin'i Joda tsy handefitra ny helokao.
13:58 Koa ankehitriny, manambara ahy, ambanin'ny hazo izay no nisambotra azy ireo niara-niresaka. "Hoy izy hoe, "Teo ambany oaka ny Evergreen hazo."
13:59 Ary hoy izy taminy Daniel, "Marina tokoa fa, ianao koa dia efa nandainga tamin'i lohanao ihany. Fa ny anjelin 'ny Tompo niandry, mitana sabatra, mba haharingana anareo teo afovoany ka hamono anao. "
13:60 Ary avy eo ny vahoaka manontolo niantso tamin'ny feo mahery, ary nisaotra an'Andriamanitra, Izay Mpamonjy ny olona manantena azy.
13:61 Dia nitsangana hamely ny anti-panahy roa, (fa efa voaheloka Daniel azy, araka ny vava, ny mitondra vavolombelona mandainga,) ary nataony taminy araka izay efa ratsy nataony hamely ny namany,
13:62 mba hanao zavatra araka ny lalàn 'i Mosesy. Dia hamono azy ireo ho faty, ary ny ra tsy manan-tsiny dia voavonjy tamin'izany andro izany.
13:63 Fa Hilkia sy ny vadiny nidera an'Andriamanitra noho ny vavy, Susanna, amin'ny Joakim, ny vadiny, ary ny havany rehetra, satria efa hita tao amin'ny tsy fahafaham-baraka.
13:64 Ary dia tonga lehibe Daniel eo imason'ny ny olona rehetra hatramin'ny andro izany, ary taorian'izay.
13:65 Ary nangonina Astyages mpanjaka nodi-mandry any amin'ny razany. Ary Kyrosy ny Persianina nandray ny fanjakany.
14:1 Ary izany Daniela dia miaina miaraka amin'ny mpanjaka, Ary izy no nalaza indrindra tamin'izay rehetra ny sakaizany.
14:2 Ary nisy sampy tamin'ny Babylonianina atao hoe Bela. Ary isan'andro nisy lany taminy fepetra lehibe roa ambin'ny folo koba tsara toto, ary efa-polo ondry, ary enina fanaky ny divay.
14:3 Ny mpanjaka koa niankohoka teo anatrehany ka nandeha isan'andro, mba mankafy azy, ary Daniela dia niankohoka Andriamaniny. Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Nahoana ianao no tsy mankafy Bel?"
14:4 Dia namaly, hoy izy taminy:, "Satria tsy manompo sampy nataon-tanana, fa ilay Andriamanitra velona, izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary izay mihazona fahefana amin'ny nofo rehetra. "
14:5 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Tsy Bel toa anao mba ho velona andriamanitra? Tsy hitanao fa tena izy, mihinana sy misotro isan'andro?"
14:6 Dia hoy Daniela, mitsiky, "Ry mpanjaka ô, aza manao fahadisoana, fa ity iray ity dia tanimanga ny varahina ao anatiny sy teo ivelany, ary efa tsy hohanina. "
14:7 Ary ny mpanjaka, rehefa tezitra, niantso ny mpisorona ka nanao taminy hoe, "Raha tsy nanambara tamiko Izay miteny dia nihinana ireo fandaniana, ianao dia ho faty.
14:8 Fa raha azonao ampisehoana fa Bela no mihinana ireny, Daniela ho faty, satria niteny ratsy an'i Bela. "Dia hoy Daniela tamin'ny mpanjaka, "Aoka ary hatao araka ny teninao."
14:9 Ary ny mpisoron'i Bela dia fito-polo, afa-tsy ny vadiny, ary ny zaza amim-behivavy, ary ny zanany. Ary ny mpanjaka nandeha niaraka tamin'i Daniela tao an-tempolin'i Bel.
14:10 Ary ny mpisoron'i Bela hoy, "Indro, isika mivoaka, ary ianao, Ry mpanjaka ô, nametraka ny hanina, ary afangaro ny divay, ka hanidy ny varavarana, ary asio tombo-kase izany amin'ny peratra.
14:11 Ary raha miditra ao an-maraina, raha toa ianao tsy nahita fa Bela no naharitra aina rehetra, dia hijaly ny fahafatesana, raha tsy izany Daniela dia, izay efa nandainga hamely anay. "
14:12 Nefa izy tsy nisy ahiahy satria efa nanao fidirana miafina ambanin'ny latabatra, ary izy ireo foana niditra ny alalan 'izany ka nandany ireo zavatra.
14:13 Ary dia toy izany nitranga, taorian 'ny efa lasa, fa ny mpanjaka nametraka ny sakafo eo anatrehan'i Bel, ary nandidy ny mpanompony Daniel, ary dia nitondra an'i lavenona, ary ny fanasivana azy manerana ny tempoly teo imason'ny mpanjaka, ary, rehefa nandao, dia nohidiana ny varavarana, ary rehefa afaka izany famehezana amin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka, dia lasa nandeha ireo.
14:14 Fa ny mpisorona niditra alina, araka ny fanaony, ny vadiny, ary ny zanany, ka dia nihinana sy nisotro ny zava-drehetra.
14:15 Fa ny mpanjaka nitsangana tamin'ny voalohany hazavana, ary Daniel niaraka taminy.
14:16 Ary hoy ny mpanjaka:, "Moa ve ny tombo-kase nitsaharan'ny, Daniel?"Ary izy namaly, "Izy ireo no nitsaharan'ny, Ry mpanjaka ô. "
14:17 Ary raha vao nanokatra ny varavarana, nibanjina ny mpanjaka teo amin'ny latabatra, dia niantso tamin'ny feo mahery, "Lehibe ianao, O Bel, ary tsy misy tsy misy fitaka aminao. "
14:18 Ary Daniel Nihomehy, ary natao indray ny mpanjaka, ka dia tsy hiditra, ka hoy Izy:, "Tsara Kosa Ilay lampivato, Mariho izay dian'i ireo. "
14:19 Ary hoy ny mpanjaka:, "Hitako ny dian'ny olona, sy ny vehivavy, sy ny ankizy. "Ary ny mpanjaka dia tezitra.
14:20 Dia nosamboriny ny mpisorona, ary ny vadiny, ary ny zanany, dia nasehony azy ny varavarana miafina amin'ny alalan'ny izay niditra ka nandevona ny zavatra izay teo an-latabatra.
14:21 Noho izany, ny mpanjaka namono azy ireo, ary Bela natolony eo an-herin 'Daniel, izay nazerany izy sy ny tempoliny.
14:22 Ary nisy dragona ao amin'io toerana io, ary ny Babylonianina niankohoka teo anatrehany.
14:23 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Daniela, "Indro, ankehitriny tsy afaka milaza fa tsy Andriamanitra velona; noho izany, mankafy azy. "
14:24 Ary hoy Daniel, "Tiako fatratra ny Tompo, Andriamanitra ô, fa Izy no Andriamanitra velona. Fa Izy no tsy Andriamanitra velona.
14:25 Noho izany, ianao omeo ahy ny hery, Ry mpanjaka ô, Ary hotanterahiko ny dragona io tsy sabatra na ny klioba. "Ary hoy ny mpanjaka:, "No anomezako azy ho anao."
14:26 Ary izany Daniela naka dity, ary ny matavy, ary ny volony, ary nahandro azy ireo. Ary nanao vongan ka nataony tao an-dragona am-bavan'ny, ary ilay dragona vaky. Ary hoy izy:, "Indro, Izao no mivavaka. "
14:27 Ary rehefa nandre ny Babylonianina izany, tezitra indrindra izy ireo. Ary ny fiaraha-mivory hamely ny mpanjaka, hoy izy ireo, "Ary ny mpanjaka dia lasa ny Jiosy. Efa nandrava Bel, izy nampihatra ny didim ny dragona, ary efa namono ny mpisorona. "
14:28 Ary rehefa tonga teo amin'ny mpanjaka, hoy izy ireo, "Manafaha Daniel ho antsika, raha tsy izany dia hanao ianao sy ny ankohonanao. "
14:29 Noho izany ny mpanjaka izy ireo dia nahita fa nanery azy mafy, ary noho izany, rehefa voaterin'ny teny maintsy, dia natolony Daniel ho azy ireo.
14:30 Ary natsipiny tao an-davaky ny liona, dia nitoetra nandritra ny enina andro.
14:31 Koa, ao an-davaka nisy liona fito, ary efa nomena azy ireo fatiny roa isan'andro, sy ondry roa, kanefa dia tsy nomena azy ireo, ka dia izy ireo handevona Daniel.
14:32 Ary nisy tany Jodia mpaminany antsoina hoe Habakoka, ary efa nahandro sakafo kely dia namaky ny mofo tao anaty vilany, ary nony tany an-tsaha, ho entiny ho ao amin'ny mpijinja.
14:33 Ary hoy Ilay Anjelin'i Jehovah niteny tamin'i Habakoka, "Ento ny sakafo fa ianao dia manana tany Babylona, an'i Daniel, izay any an-davaky ny liona. "
14:34 Ary hoy Habakoka, "Tompo ô, Tsy nahita Babylona, ary tsy fantatro ny lavaka. "
14:35 Ary ny anjelin'ny Tompo nisambotra azy tamin'ny an-tampon-dohany, ka nentiny ny volon-dohany, dia nametraka azy tao Babylona, eo an-davaka, noho ny herin'ny fanahiny.
14:36 Ary Habakoka niantso, nanao hoe:, "Daniel, mpanompon'Andriamanitra, raiso ny sakafo hariva fa Andriamanitra no naniraka anao. "
14:37 Ary hoy Daniel, "Efa nahatsiaro ahy, Andriamanitra ô, ka tsy mba niala ireo izay tia anareo. "
14:38 Ary nitsangana izy ka nihinana Daniel. Ary avy eo dia ny anjelin'ny Tompo Habakoka avy hatrany niverina ho any amin'ny fonenany.
14:39 Ary noho izany, amin'ny andro fahafito, ny mpanjaka tonga morn Daniel. Ary tonga teo amin'ny lavaka, ary nibanjina in, ary indro, Daniel dia nipetraka teo afovoan'ny liona.
14:40 Ary ny mpanjaka dia niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:, "Lehibe ianao, Tompo O, ny Andriamanitr'i Daniela. "Ary nisintona azy avy tao an-davaky ny liona.
14:41 Koa, ireo izay efa anton 'ny fahalavoany, dia hatsipy ao an-davaky, Ary nihinana izy ireo indray mipi-maso eo anatrehany.
14:42 Dia hoy ny mpanjaka:, "Aoka ny mponina rehetra amin'ny tany rehetra hatahotra ny Andriamanitr'i Daniela. Fa Izy no Mpamonjy, miasa famantarana sy fahagagana eto an-tany, izay afaka Daniela ho afaka tamin'ny davaky ny liona. "